ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အက်ဆစ်၏ နိုင်ငံရေးဝေဖန်သုံးသပ်ချက်
Mad dog Acid,
well done, you doing good job and you had done better than SPDC's proxy to defaming and insult on the leadership of movement.Most unfortunately you have courage to barking only in the dark, but not reveal your true face. so we may presume you as double agent or more. If you are truely democratic, come forward and announce your action plan and program to organise the people. and claim leadership and lead the people and defeat (seemly) your enemy SPDC.
I don't understand message you want to give?
Don't forget that it's easy to comment but difficult to do.
It's better to suggest the available options for the NLD to think rather than insulting and moaning to others.
This post is not beneficial to anyone at all.
But I know this is the way the blog owner always talking at every interview.
ဆန့်ကျင်ဖက် အမြင်ကနေ debate လုပ်ထားတဲ့ post ကောင်းလေးတစ်ခုပါ ။ ရဲရဲတင်းတင်း criticize လုပ်ထားတာ ကို အသိအမှတ်ပြုမိပါတယ် ။ ပြီးတော့ NLD ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်း မှာ အန်တီစု ကလွဲရင် အားမရတာချင်းလည်း သဘောထားတူညီပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အန်တီစု ဟာ good diplomatic leader တစ်ယောက်ပါ ။ သူဟာ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို သိပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ လူတွေလမ်းမထွက် ပြီး protest လုပ်လို့ အကျိုး အမြတ်ရဦးမယ် မထင်ပါဘူး ။ အန်တီစုကို အထဲ ပြန်ထည့်ပြီး ပြည်သူတွေပဲ သေရဦးမှာပါ ။ အချိန်မတိုင်သေးပါဘူး ။ ပြီးတော့ အန်တီစု ဟာ အာဏာမက်သူမဟုတ်ပါဘူး ။ မြန်မာပြည်ကောင်းဖို့ အတွက် ရတဲ့နည်းနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်နေဦးမှာပါ ။ အခုလို အခြေအနေမျိုးမှာ ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးတို့လို less sensitive နေရာမျိုးကနေ စပြီး တည်ထောင်နေတာ မှန်ကန်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော့် comment ကိုလည်း debate လုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ ဒါပထမဆုံးကျွန်တော် ရေးဖူးတာပါ ။
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဆိုတာ နအဖ ၇ဲ.သူလှို၊ဒလန်ဆို
ခလေးတွေးတွေ မတွေးပါနဲ့.....
အမေစုလို လူထုခေါင်းဆောင်ကို စိတ်နဲ့ တောင်အပြစ်မတင်သင့်ပါဘူးကွာ.....
အက်ဆစ်ဆိုတဲ့ကလောင်ရှင်း ကိုဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ သိရမယ်မသိဘူး လို့ မညင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကမယုံဘူး
WHAT A SHAME Acid
You should think and look at your self first before you wrote it.If you think you are realy good please forward and show us your talent.
Is true what Kyaw said..you shoud not bark in the dark.Don't waste your time and prove it to us ;if you can prove and can do better than NLD leaders I don't mind to follow you.
PS--It's not going to happen.You know your self.
This is consideredashort cut to attract the attention from people. But unfortunately, it did not work.
I beleive, the author is the blogger himself or someone whom he shares the same kind of thought.
If it isakind of psych war, I am sorry to say that it is not effective either way.
By the way, it is not appropriate to address yourself as doctor when you write/post non-medical stuff. Do you understand professional ethics?
သင့်လို အမှန်ကိုမမြင်နိုင်သူတွေအတွက် တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။
မြန်မာပြည် ကြီး လွတ်လပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
အမေစု ရဲ့တန်ဖိုးကို သင်တို့ အမြန်ဆုံးသိနိုင်ပါစေ။
"လူတိုင်း လူတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိသည်"
လမင်း ကို ခွေး ဟောင် နေတယ် လို့ ပဲ ယူဆပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲ မကြေလည် မှု ဖြစ်ရတာ က ပြောဆို ဝေဖန် နေသူတွေ ရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် အဆင့် အတန်း နဲ့တော်လှန်ရေး မှာ တကယ့် စေတနာစစ်နဲ့ ပါဝင်ခဲ့သူတွေ လား လို့ ဆန်းစစ်ရင် ဖြင့် အဖြေ က အသေအချာရှိပါတယ် ။ လုပ်ကြည့်ပါ ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြခဲ့ ဖူးသလား ထောင်ထဲ ၀င်ရမယ် မှန်း သိသိ နဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး အတွက် တည့်တည့် မတ်မတ် လုပ်ဖူးကြသလား ဆိုတာပါပဲ - စာပေတွေ ဖက် ရုံ နိုင်ငံတကာ အခြေအနေတွေ နဲ့နှိုင်းယှဉ် ပြီး သတင်း လောက်ကြည့်ရုံ သိရူံ နဲ့တိုင်းပြည်တခုလုံးအပြောင်းအလဲ အတွက် တစု တစ်ယောက်ကို စော်ကားနေတာဟာ ရန်သူနဲ့ထပ်တူအချိုးကျပါတယ် ။ အိရွှေစင်ညွန့် 
Aunty Suu well know that real essence of revolution is far more than kicking out the suppressive military regime by any possible means in any human costs.
Real revolution needs time, patience and learning so as to change mindset of people and make people familiar with Democratic practices.
In our past, Parliament Democracy failed and Military regime appeared not just due to U Nay Win's Military Coup but lack of Democratic mindset of leaders and public isacause as well.
So we need to avoid reckless moves and should change our attitude first.Otherwise, our stupid actions will be bound to welcome another authoritarian regime.
အမှန်တွေပါပဲဗျာ ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီးဆိုတာကြောင့်ရော ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံအရှိန်နဲ့ ၁၉၈၈/၈၉ ကာလတွေမှာ ရဲရဲရင့်ရင့်သရုပ်ဆောင်ပြခဲ့တာ တွေကြောင့်ရော လူထုခေါင်းဆောင်လို့ လေး စားသတ်မှတ်ခဲ့ရသမျှဟာ (ဘုရားမှတ်ကိုးကွယ်ခဲ့တာ တောင်ပို့ကြီး ဖြစ်နေတယ်ဆိုသလို ) မှားပြီထင်ပါရဲ့။ တကယ် တော့ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးက ၁၉၈၈မတိုင်ခင် ၂၆ နှစ် ၊ ဒေါ်စုသိတတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ ၁၆နှစ်သမီး အရွယ်လောက်ထဲက ဆိုးရွားခဲ့တာပါ ၊ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်စုက ကျောင်းသားတွေသွေးနဲ့ရင်း ပြီးချိန် ခေါင်းဆောင်လုပ်ရပြီဆိုတဲ့အချိန် အသက်၄၂ နှစ်ကျမှ နိုင်ငံရေးလောကမှာ ပေါ်လာခဲ့တယ်၊ ၈၈၈၈တုံးကလဲ ပြည်သူတွေ အတွက်ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ရမှာကို ဦးနုတို့နဲ့ အာဏာအားပြိုင်မှုတွေကြောင့် မဖြစ်ခဲ့ပဲ ပြည်သူတွေစစ်ကျွန်ဘ၀မှာနစ်ခဲ့ပါတယ် ၊ စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကို ရဲရဲတောက်ဆန့်ကျင်မယောင်ယောင်နဲ့ တကယ်တမ်းကျ ပါတီထောင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ အာဏာရရှိရေးလမ်းကိုပဲ လျှောက်ခဲ့တယ်၊ တကယ်တော့ ဒေါ်စုနေအိမ်အကယ်ချုပ်နဲ့ နေခဲ့တယ်ဆိုတာ သက်တောင့်သက်သာနေရတာပါ ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ ၊ ဦးအုန်းသန်းတို့လိုလူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် ဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူး၊ အဖေ့ခြေရာကိုနင်းမဲ့သမီးလို့ထင်ခဲ့သမျှ ဘာမှ မဆိုင်လွဲနေပြီဆိုတာ ပြည်သူတွေစစ်ကျွန်သက်၂၃နှစ်ထပ်ကြာခဲ့တာကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ် ၊ ဗိုလ်ချုပ်က ပြည်သူ တွေအတွက် လုပ်သင့်တာလုပ်တယ် ၊ သူမက သူမရဲ့နိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုခံ ရဘိုဆိုတာအတွက် သူမရဲ့နိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာအတွက် စစ်တပ်လုပ်သမျှကိုသူတော်ကောင်းမကြီးလို နေပြရင်း စစ်တပ်ထင်ရာဆိုင်းနေသမျကို မသိမသာလှစ်လျှူရှုလာခဲ့တယ် ၊ ဒီနေ့ တော်လှန်ရေးထိထိရောက်ရောက်လုပ်ချင်သူ တွေက သူမကြောင့် ယောင်၆၀ ဖြစ်ကုန်ကြရတယ် ၊ သူမကိုယ်သူမ နိုင်ငံရေးပါရဂူမကြီးလို ၊ အရာရာသူမမသိမရှိ တရားတွေဟောရင်း ၊ ပြည်သူတွေကို ဟိုလို ဒီလိုလုပ်သင့်တယ်တွေပြောရင်း ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဘ၀ပျက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားပြည်သူတွေ ရဲ့ဆန္ဒကို မသိမသာ ဥပေက္ခာပြုနေသလိုလုပ်နေခဲ့တယ် ၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာချက်ကို သူနဲ့ NLD ကိုယ်တိုင်ကမပြောတော့ပဲ ဝေ့နေတယ် ၊ ဖြစ်လာတဲ့အစိုးရသစ်နဲ့ဆွေးနွေးဘို့အသင့်ပဲလို့ စစ်တပ်လုပ်သမျှလက်ခံပေးနေသလိုစကားတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကိုေ၀၀ါးစေခဲ့တယ်၊ ဒီနေ့ သူမလုပ်ရပ်တွေက သူမကိုခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဆက်သဘောထားဘို့ စဉ်းစားရပါတော့မယ်၊ NLD ကို လုထုဦး ဆောင်ပါတီနေရာကနေ သာမန်လူမှုရေးအသင်းလောက်ပဲသဘောထားရတော့မလား စဉ်းစားရပါတော့မယ်၊ ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတာတွေ ပြောချင်နေတာတွေကို အက်စစ်က ချရေးပြတဲ့အတွက် အက်စစ်ကိုထောက်ခံတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ အက်စစ်ရေးတာ အရမ်းပျော့တယ် ၊ ၈၈၈၈အရေးတော်ပုံကြီးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးဘ၀ရင်းပျက် ၊ အတိဒုက္ခမျိုးစုံရောက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေ ၊ ဒီနေ့စစ်အာဏာရှင်ဒါဏ်ကိုမျိုးစုံခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် အက်စစ်ပြောတာ အရမ်းပျော့နေသေးတယ်ဗျာ...
အက်စစ်လို အိုင်ကျူနဲ့ အိုင်ဆောရီးပါကွယ်၊ အသုံးလုံးလို့ခေါင်းစဉ်တပ်ပေးပါလား၊
အဲဒီအဆင့်လောက်ကတော့ ၅ တန်းကလေးတောင် ဘောပင်ချထားရင် ရေးပြတတ်သေးတယ်။ ဘာမှလဲ အဆီအနှစ်ရှိတာမပါမို့ဘလောက်ပေါ်တင်လောက်တဲ့ စာအဆင့်အတန်းမရှိတာကို ဒေါက်တာကြီးအနေနဲ့အယ်ဒီတာ မွမ်းမံသင်တန်း ထပ်တက်သင့်ပါတယ်။ (ပရိုပိုဆယ်ပြုတ်လို့အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့ ဧရာဝတီအောင်ဇော်ကို ကမ်းလှမ်းကြည့်ပါလား- ကျနော်တို့ လို ၀ါသနာရှင်တွေ လစာဝိုင်းကူပေးပါ့မယ်) လက်ရှိအစိုးရသစ်တက်လာပီး အဲဒီအထဲက တွဲလုပ်လို့ ရတဲ့သူတွေရယ်။ သိပ်မကြာတဲ့ကာလမှာ ပြည်တော်ပြန်လာမယ့်မြန်မာများရယ် (ပြည်ရောက်အင်အားစုများ အမှန်တကယ် တိုင်းပြည်ချစ်ရင် ပြန်ပီး လုပ်ရပါ့မယ်) ။ ဒေါ်စုရဲ့ပြည်သူအတွက် တကယ်အကျိုးရှိတာတွေ ဆောင်ဖို့အတွက် လက်ရှိ cover (ကာဘာ) လုပ်နေရတဲ့ ဟာတွေရယ်။ နိုင်ငံတကာက ပံ့ပိုးမှုတွေရယ်ကို ပေါင်းစပ်ပီး ပုံဖော်လာမယ့် ဒေါ်စုရဲ့ လက်တွေ့ ကျကျ ဖော်ဆောင်လို့ ရတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကို အက်ဆစ်လို အိုင်ကျူနဲ့မတွေးမိတာကို အိုင်ဆောရီးပဲ ပြောလိုက်ပါရစေ။
ဖားချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာသွားဖားပါလား။ သူများကို အဓိပ္ပါယ်မရှိဝေဖန်တာ အောက်တန်းကျတာမှ ထဘိန်တန်းအောက်ကိုကျတယ်လို့မှတ်ပါ။ လူ့ဘ၀ဟာအရမ်းကိုတိုပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်မကတွေကို လုပ်မှ ခင်ဗျားဘ၀ရပ်တည်နိုင်မယ်ဆိုရင် ရွမ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း မေးပါရစေ။ အဲသလိုမှမရေးရင် ခင်ဗျားရော ခင်ဗျားမိသားစုကို မုဒိန်းကျင့်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခံရလို့လား။ အကြံပေးပါရစေ။ အခုလို စာတွေလျှောက်ရေးနေရင် လူအမြင်ကပ်တယ်။ တိတ်တိတ်လေး ဆီဆွတ်ပေးလိုက်ပါလား။ ဘယ်သူမှ သိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီဘ၀ဒုတ်ခရောက်ရင်တောင် နောင်ဘ၀ ကောင်းစားမှာပါ။ သနားတယ်။
၉၀ ရောရွှေဂုံတိုင်ကြေငြချက်ကိုပါမပြောတော့ပဲ အစိုးရသစ်
နဲ့စကားပြောမယ်ဆိုတာတွေထွက်လာတာ ကိုကစစ်တပ်ကို စာပွဲဝိုင်းရောက်လာမယ်ထင်နေတဲ့ အမိုက်မှောင်ဖုံးနေတဲ့မိုက်မဲမှုကြောင့်ပါ။တကယ်က စစ်တပ်ဆွဲခေါ်ရာဒရွတ်တိုက်လိုက်လိုက်နေရတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ပဲ ဒေါ်စုနဲ့NLDမှာရှိတာပါ။၂၁ရာစုပင်လုံဆိုတာကနားထောင်ကောင်းပေမယ့် ဖြစ်ပါ့မလား။လူထုတွေတာဝန်ကျေခဲ့တာအကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ။နိုင်ငံရေးခေါင်ဆောင်တွေကိုအဖြေတခုရအောင်ဘာတွေများတာဝန်ကျေခဲ့ဘူးပါသလဲ။ကိုအက်စစ်စကားလုံးတွေပျော့နေသေးတယ် ။အက်စစ်နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ဒီထက်ပိုပြောသင့်တယ်
ကိုယ်ဘာသာ အရက်ရောင်းနေတာအေးဆေးနေစမ်းပါ အိရွှေ စင်ညွန့်ရေ..ဒေါ်စုထိရင်နာပြတာထက် ဗမာပြည်သူတွေအတွက်နာတတ်စမ်းပါ ၊ ....
ဒေါ်စုနဲ့နီးစပ်သူများ အက်စစ်ဆောင်းပါးကို ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်ကို ပေးဖတ်ဆုံးဖြတ် ခိုင်းစေချင်ပါတယ် ၊ အက်စစ်လိုအမြင်မျိုး ပြည်သူကြားမှာ ဒီမိုကရေစီ ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေကြားမှာ ၊ အထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဒေါ်စုသိရင်ဘာပြောမလဲ ၊
သူမလဲ အင်တာနက်ရှိနေပြီပဲ Email လိပ်စာသိသူတယောက်ယောက်က ဒီလိုတော့ဖြစ်နေကြပြီလို့ လှမ်းပို့ရင် သူမ ဘာပြောလေမလဲ ၊ သူမ ဘာသာဆုံးဖြတ်ပါစေလား
I like this post. I am pretty sure that many Burmese have been lived in the dark and not you. What I have seen in the comments are that many people are still in the "group conformity". They believe what the media says. I don't see why people are still hanging their hopes on falling NLD. There are many people who are working for the country withoutaNoble Peace Prize. Noble peace prize doesn't make someone respectable, I don't mean that those who get this prize are not respectable but, I am pretty sure as she is not. She is justapuppet being controlled by some communists. Who knows the truth? No one. When she was given this prize, she hasn't done much for the country yet, once she got it, she has to continue even if she wants to. NLD's incapabilities can be seen during the Monks' demonstrations, they didn't dare to do anything. They are so afraid. This is not related to the topic, but I just want to say about her family. Look at her son, coming to the country withatattoo on his hands. If he isarespectable political figure's son, why did he come wearing short sleeves withatattoo on his hands? Have you ever seen any politicians' sons wearing tattoos? Well, even if they do, they don't show them. When I say these things people think I amaperson from Military. No, I am not. I just don't think that she should be called "mother" for just introduced the word "democracy" to the country when she has done nothing yet. I think it's very lame. Kyaw Thu and Zarganar have done somthing and they should be well-respected and not NLD for sure.
ပြောသင့်တာကိုပြောတဲ့ ကိုအက်စစ် ရေ
ပြောသင့်တာကိုပြောရပါမယ်။ခုရေးတာဟာအက်စစ်သမိုင်းတာဝန်ကျေပါတယ်။အခုလိုရေးတာဟာအက်စစ် တယောက်ထဲရဲ့အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျနော်ယုံပါတယ်။လူမှုရေးအလုပ်တွေကလွဲလို့(သွေးလှူယုံ၊စာအုပ်လေးတွေလိုက်လှူယုံ)ဘာနိုင်ငံရေးအလုပ်ကိုမှချမပြနှိုင်သေးတာကတော့လူထုကိုယောင်ချာချာဖြစ်စေရပါတယ် ။စစ်တပ်ကတော့သူ့ခရီးသူအေးဆေးဆက်နေပါပြီ ။စစ်တပ်သွားတဲ့နောက်ကနေလိုက်အော်ကြတာကပဲ
အက်ဆစ်ရဲ့ ချီး ဒေါ်စုစားသင့်တယ်...
လူထုကိုယောင်ချာချာဖြစ်စေရပါတယ် ။စစ်တပ်ကတော့သူ့ခရီးသူအေးဆေးဆက်နေပါပြီ ။စစ်တပ်သွားတဲ့နောက်ကနေလိုက်အော်ကြတာကပဲ
သတ္တိရှိလို. အပြုသဘောနဲ.ဆန့်ကျင်ဖက် အမြင်ကနေ Debate လုပ်ချင်ရင်လဲ ရိုးရိုးသားသားနဲ.
ထင်သာမြင်သာရှိရမှာပေါ့ ၊အခုဟာကမရိုးမသား နာမည်ဝှက်နဲ.အမှောင်ထဲကနေလက်သီးပုန်းထိုးနေသလိုပဲ၊
အလားအလာမကောင်းလို.မြန်မာပြန်ပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်၊နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာအရွေးကောက်ခံချင်ရင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်တဲ.နည်းမဟုတ်ပဲ၊NLD နဲ.လွတ်လွပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်။၂၀၀၈ ဖွဲ.စည်းပုံအရမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်ချင်သော
ထိုင်းနိုင်ငံရှိအတိုက်အခံတွေအတွက် NDF ကဦသိန်းညွှန်.ကလွှတ်တော်မှာ လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင်အဆိုကိုတင်သွင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်…မဝေးတော.တဲ.အနာဂတ်မှာလွှတ်တော်အမတ်
ဧကန်ဏတော.အက်စစ်ဆိုသူဟာ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေရင်စိတ်မကောက်နဲ.ပေါ.ဗျာ …:D
အခုဒါတွေဖတ်ကြည့်ရတာတော့ ကိုယ့်လူအခြင်းခြင်း သွေးကွဲအောင်ပြောတာဘဲရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ရဲ့အမေစု က တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်ရင်းနဲ့ နိုဘယ်ဆု အပါအ၀င် နိုင်ငံ တိုင်းက အသိအမှတ်ပြုတာကိုခံခဲ့ရတယ်။ ဒါတွေကို ရချင်လို့ လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ စာရေးတဲ့ အက်ဆစ်က ဘယ်လောက်အထိ အရည်အချင်းရှိလို့ပြောနေရတာလဲ။ ကဲထားပါတော့ အီဂျစ်မှာ အခု အစွန်းရောက်မူဆလင်တွေက အာဏါရလာမှာကိုတော့ အားမပေးချင်ပါဘူး။ ဘီဘီစီသတင်းထဲမှာလာတါက သတင်းထောက်တွေကို ဆန့်ကျင်ချိန်းခြောက်နေတာ။ ပြည်တွင်းပြည်ပ လူ့ အခွင့်အရေးသမားတွေကို ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခံ နေရ တာတွေကြားနေရပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ အမေစုတို့ ဘက်က နေ ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ့ ဆက်လက်ထောက်ခံ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဆိုတာ တဖြေးဖြေး ရုပ်လုံး ပေါ်လာသလိုဘဲခံစားရတယ်။ ကျနော် အမေစုတို့ လို နိုင်ငံအတွက် ဘါမှထိထိရောက်ရောက် ၀င်မလုပ် နိုင် ပေမယ့် သူ့ ရဲ့လုပ်ရပ်ကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး မလုပ် ပါဘူး။ ဒီလိုဆောင်းပါးမျိုးကို ဖတ်ပြီး နအဖ အဖွဲ့ ပိုကြိုက်လေဖြစ် မှာပါ။
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ စစ်တပ်အစိုးရကတော့ ရုဒ်မက် ၇-ချက်အတိုင်း ခြေလှမ်း လှမ်းလာလိုက်တာ အစိုးရ ဖွဲ့တော့မယ့် နောက်ဆုံး အပိုင်းကို ရောက်လာပါပြီ။
လွှတ်တော်ခေါ်ပြီး သမ္မတ ရွေးချယ်ခြင်း တောင် လုပ်နေပါပြီ။
အစိုးရသစ်တောင် မဖွဲ့ ရသေးဘူး အတိုက်အခံတွေ ဘက်က လေသံ အမျိုးမျိုး ကွဲတာ သိလိုက်ရပါတယ်။
တစ်ခုက ၂၇- ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၁ ဗွီအိုအေ နှင့် အာအက်ဖ်အေ-သတင်း ။--- အစိုးရသစ်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ဒေါ်စု အသင့်-ပါတဲ့။
၃၁ ဇန်ဝါရီ ၂၀၁၁ - DVB--“နအဖ ခေါ်ယူကျင်းပနေသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ပြည်ပရောက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လက်မခံ”တဲ့။
နောက်တစ်မျိုးက ဥရောပရောက် အင်အယ်ဒီအယ်အေ နဲ့ အခြားအဖွဲ့ တွေရဲ့  ၃၁ ရက် ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၁-“ အာဏာရှင်၏ ပါလီမန် ခေါ်ယူမှု အပေါ် ရှုံးချ ကန့် ကွက်ကြောင်း ကြေငြာချက်”တဲ့။
ဒီကြေငြာချက်နဲ့ သတင်းဌာန ထုတ်လွှင့်ချက်တွေအရ ဆိုရင် ခေါင်းဆောင်စကားကို နောက်လိုက်တွေက မသိလို့ ပြောနေကြတာလား၊ ခေါင်းဆောင်တွေ လုပ်ရပ်ကို လက်မခံချင်တော့တာလား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့  စကားကို မလေးစာချင်တော့တာလား စဉ်းစား နိုင်အောင် အဲဒီ သတင်း ၂ ခုလုံးကို မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတို့ အရင်လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ဗွီအိုအေ- ဦးဇော်ဝင်းလှိုင် ကြာသပတေး, 27 ဇန်နဝါရီ 2011
ပေါ်ပေါက်လာမယ့် အစိုးရသစ်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အဆင်သင့်ပဲလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကဆစ် ပီရွန်း (Kasit Pironmya) ကို ပြောကြားခဲ့ တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကဆစ် ပီရွန်းနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ မီကားဆား ဧည့်ရိပ်သာမှာ တွေ့ဆုံစဉ် စစ်အစိုးရနဲ့ နှစ် ဘက် အလျှော့အတင်းလုပ်ပြီး ပြုလုပ်မယ့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ဖို့ သူမဘက်က လမ်းကြောင်းဖွင့်ထားတဲ့ အကြောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောကြားခဲ့ တယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ အဆင့်မြင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန အရာရှိတဦးက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ ရုပ်သိမ်းပေးရေးအတွက် အာဆီယံအဖွဲ့က လိုလားသလို တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အရှိန်တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်တာကို မြင်တွေ့လိုတဲ့ အ ကြောင်း မကြာခင်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ၀န်ကြီးများ တွေ့ဆုံပွဲအတွင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာတွေကို နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ကဆစ် ပီရွန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လည်ပြောပြခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗွီအိုအေ သတင်း ဌာနက ဆက်သွယ် စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားတာပါ။
အစိုးရသစ်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ အာအက်ဖ်အေ သတင်း ဌာန တင်ပြချက်မှာတော့
မြန်မာနိုင်ငံ ကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး နဲ့ အတူ လိုက်ပါသွားခဲ့တဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဌာနမှ ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူ မစ္စတာ-ကနီက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် တွေ့ ဆုံရာတွင် မြန်မာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာစီယံရဲ့ သဘောထားများ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အာစီယံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ပိတ် ဆို့  အရေးယူထားတာတွေကို တာတွေ ကို လက်မခံလိုကြောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူ ထားတာတွေကို ရုပ်သိမ်းစေလိုကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် မြန်မာ စစ်အစိုးရ စစ်ခေါင်းဆောင်များကို နိုင်ငံတကာ ခုံးရုံး တင်ရေး ဖို့ လုပ်နေတာကိုလည်း လက်မခံကြောင်း၊ မြန်မာ စစ်အစိုးရ အနေနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးကို ထိထိ ရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်တာကို အာစီယံနေနဲ့ တွေ့ မြင်လိုကြောင်း ထိုင်း နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ တစ်နာရီကြာ အလွတ်သဘော တွေ့ ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ပြောဆိုသည်။
ထိုင်း နိုင်ငံ အနေနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်တလျှောက် ဖြစ်ပွါးနေတဲ့ စစ်ပွဲတွေကို အမြန် ပြီးဆုံး စေလိုကြောင်း ၊ မြန်မာ စစ်အစိုးရအနေနံ့ တိုင်း ရင်းသား လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့ တွေနဲ့ မတိုက်ခိုက်စေချင်သလို တိုင်း ရင်းသား လက်နက် ကိုင်တွေက လည်း ထိုင်းနယ်မြေကို အသုံးပြုပြီး မလုပ်စေလိုကြောင်း၊ အစိုးရနဲ့ စေ့စပ်ဆွေးးနွေးမှု လုပ်တာတွေကို လိုလားကြောင်းလည်း နအဖ စစ်အစိုးရအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ထိုင်း နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးက သူမအား ရှင်းပြ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ မှ ပြန်လည်ပြောကြားမှုကို မေးမြန်းရာမှာတော့-သူမဟာ အလွန် စိတ်ရှည် သည်းခံ တတ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး။ သူမဟာမြန်မာပြည် စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး အတွက် စစ်အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ အသင့် ဖြစ်နေကြောင်း ပြန်လည်ရှင်းပြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ တုန့် ပြန်ပြောဆိုမှု ကို ရှင်းပြ ပြောဆိုရာတွင် “အာစီယံရဲ့သဘော ဆန္ဒကို သိရလို့ဝမ်းသာကြောင်း၊ ပြည်သူ လူထုကို ထိခိုက်စေမယ့် ကိစ္စဆိုရင် သူမအနေနဲ့ ပိတ် ဆို့ မှုတွေကို သူမအနေနဲ့ စဉ်းစား သုံးသပ် သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့် မြတ်ရေး ကိစဏတွေ အနေနဲ့ အစိုးရရဲ့ ရန် သူ မဟုတ်ကြောင်း၊ စေ့ စပ်ဆွေးနွေးရေး အနေနဲ့ သူမအနေနဲ့ အစဉ်အမြဲ အဆင်သင့် ရှိကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် သူမအနေနဲ့ ပေါ်ထွန်းလာမယ့် အစိုးရသစ်နဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး ကိစ္စကို စဉ်းစား သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြန်လည်ပြောဆိုကြောင်း အာအက်ဖ်အေသို့ ရှင်းပြသည်။
ကိုဇော်မိုးကျော် ၂၇ ဇန်န၀်ရီ ၂၀၁၁-ည ဘက်-ထုတ်လွှင့်ချက်
နအဖ ခေါ်ယူကျင်းပနေသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ပြည်ပရောက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လက်မခံ
ခင်မောင်လတ် ၃၁ ဇန်ဝါရီ ၂၀၁၁ - DVB
ပြည်တွင်းမှာ နအဖ ခေါ်ယူကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို လက်မခံကြောင်း ပြည်ပအခြေစိုက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကျောက်တံခါး မဲဆန္ဒနယ်မြေက အရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဉီးလှဉီးက အခုလိုပြောပြပါတယ်။
“၁၉၉၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲက ဘာကြောင့် အဲဒီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လွှတ်တော်ခေါ်ယူပေးတာပဲ ဖြစ်စေ၊ ဉပဒေ ရေးဆွဲခြင်းကိစ္စတွေမှာပဲ ဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်မပေးတဲ့ အမှုအခင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကနေ စစ်ဆေးပေးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အဖွဲ့အနေနဲ့ ပြောရရင် သူတို့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ တခုလုံးကနေစပြီး လက်မခံတာဖြစ်တဲ့အတွက် လွှတ်တော်တခုတည်းကျမှ ကျနော်တို့ လက်ခံစရာ မရှိပါဘူး။
ရွေးကောက်ပွဲကိုပင်လျှင် ကျနော်တို့ ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေနဲ့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်စရာ ရှေ့လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရလို့ ကြေညာပြီးတက်လာမယ့်၊ ဘယ်လိုပဲ အရေခြုံထားပါစေ ခြုံထားတဲ့အစိုးရလို့ ကြေညာလာတဲ့ လူတွေကို ဒီမိုကရေစီရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရ သွားတယ်မသွားဘူးဆိုတာကို ကမ္ဘာက သုံးသပ်နိုင်ရေးအတွက် ရှေ့ဆက်လက် ဒီမိုကရေစီနည်း ကျကျ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဖြစ်ကြောင်းကို တင်ပြချင်ပါတယ်။”
စစ်ကိုင်းတိုင်း ပုလဲမဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ် ၂ က ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ကလည်း နအဖကခေါ်ယူနေတဲ့ လွှတ်တော်အပေါ် ခုလို ဝေဖန်သွားပါတယ်။
“ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ ရာမဇာတ်တော်လိုပါပဲ။ ဒီဇာတ်တော်ကြီးကို နိုင်ငံတိုင်းမှာ ကတဲ့အခါမှာ ရာမပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒဿပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ၊ ဟာနုမာန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဇာတ်လမ်းကို ကကြမှာဖြစ်တယ်။ ကတဲ့အခါမှာ ဇာတ်ခုံကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ သရုပ်ဆောင်နည်းနည်းလေးနဲ့က၊ ဇာတ်ခုံကျယ်တဲ့အခါ သရုပ်ဆောင် များများနဲ့ ကတော့ ကပေမယ်လို့ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်နေရာသွားကက ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒါပဲခင်ဗျ။
“အခု ကျနော်တို့ ၂၀၁၁ ဗမာပြည် နေပြည်တော်က လွှတ်တော်က ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် ဇာတ်လမ်းနဲ့ ကရမယ့် ဇာတ်ခုံပဲဖြစ်ပြီးတော့ ရာမကလည်း ရာမ၊ ဒဿကလည်း ဒဿ၊ သီတာကလည်း သီတာ၊ ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကို ကရမယ့်သဘောပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ထူးခြားပြီးတော့မှ မျှော်လင့်လို့ မရတဲ့ ဇာတ်ကွက် အဟောင်းကြီးကို ကတယ်လို့ပဲ ကျနော်ပြောချင် တယ်ခင်ဗျ။ အချုပ်ကတော့ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကြီး ရှိနေသမျှက ဒီလွှတ်တော်အကြီးအငယ် သုံးရပ်က ဘာမှ ထူးခြားပြီးတော့ လူထုကောင်းကျိုး အတွက်ကော နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒေသတွင်း ကိစ္စတွေကော ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မယ်လို့ မယုံကြည်ပါဘူး။ ဇာတ်ခုံကျယ်တဲ့အတွက် ရာမနောက်လိုက်တွေ ဘီလူးစစ်သည်တွေနဲ့က မျောက်နောက် လိုက်တွေ ပိုတဲ့ဟာကလွဲလို့ ဘာမှမထူးဘူးလို့ ထင်တယ်။”
အာဏာရှင်သန်းရွှေ၏ ပါလီမန်ခေါ်ယူမှု အပေါ် ရှုံးချကန့်ကွက်ကြောင်းကြေငြာချက်
၃၁ ရက် ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၁-“ အာဏာရှင် သန်းရွှေ၏ ပါလီမန် ခေါ်ယူမှု အပေါ် ရှုံးချ ကန့် ကွက်ကြောင်း ကြေငြာချက်” ကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြရသော် --
ကုလသမဂ္ဂ ဘန်ကီမွန်း၊ တရုတ်နှင့် အိမ်နီးချင်း အာစီယံ နိုင်ငံများ၊ အိန္ဒိယ တို့မှ မြန်မာ နိုင်ငံကို စစ်တပ်ကြိုး ကိုင်သော နိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်အောင် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် နေကြသည်။အနောက် နိုင်ငံများ အနေနှင့်လည်း အစိုးရသစ်ကို နောက်ဆုံး ကျလျှင် ထောက်ခံကြမည်သာ ဖြစ်သည်။
၁။ နိုင်ငံတကာ အနေဖြင့် အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်နှင့် ပါလီမာန်ကို အသိအမှတ် မပြုရန်။
၂။ဘန်ကီမွန်း အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို ကန့် ကွက်ပြီး အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး တောင်းဆိုရန်၊ အာဏာရှင် သန်းရွှေ မတရား ကျူးလွန်ထားသော ရာဇ၀တ်မှု များနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့ စည်းရန်။
၃။ ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး အနေဖြင့် ပါလီမာန်ကို ကန့် ကွက်ရန်။
၄။ တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် ပြည်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည် ပေါ်ထွန်းရေး တိုက်ပွဲ ၀သင်ကြရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး အနေဖြင့် ကိုယ့်ကြမ္မာကို ဖန်တီးကြရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာလိုက်ပါသည် စသည်ဖြင့် ပါရှိပါသည်။
၁။ လှမြင့်နိုင်- ဥက္ကဌ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်။လွတ်မြောက်နယ်မြေ။ နယ်သာလန်
၂။ အရှင်ထာဝရ- အထွေထွေ အတွင်ေးရးမှူး
မြန်မာ နိုင်ငံ သံဃာ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့
ှဗမာ့ သဟာယ- ဘယ်လ်၈ျီယမ်
၄။ ဆန်းနီအောင် သန်းဦး- နိုင်ငံခြားရေးရာဌာန
၅။ မြတ်သီဟ- နိုင်ငံရေးဌာန
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု -နယ်သာလန်
“အထက်ပါ သတင်းများကို လေ့လာကြည့်လျှင် အစိုးရသစ်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ဒေါ်စု အသင့်- ဆိုသည်မှာ လက်ရှိ ပါလီမန် နှင့် လွှတ်တော် ခေါ်ကာ အစိုရအသစ်ဖွဲ့ သည်ကို ထောက်ခံသည်ဟု အဓိပ္ပါယ် ရနေပါသည်။
ပါလီမန် ခေါ်ယူမှု အပေါ် ရှုံးချ ကန့် ကွက်နေသူများက ဒေါ်စု၏ စကားကို ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့် ကျင်နေသည်ဟု အဖြေ ထွက်နေပြန်ပါသည်။”
လွန်ခဲ့တဲ့ လပိုင်းက နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း ကို ပြန်လေ့လာ ကြည့်ရင်
၁။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေကို ဆန့် ကျင်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ဘူးဆိုတာ လည်း ၀ိုင်း ၀န်း ထောက်ခံ ခဲ့ကြပါပြီ။
၂။ ၂၁-ရာစု ပင်လုံညီလာခံကြီး ဆိုတာကိုလဲ ၀ိုင်း ၀န်းထောက်ခံခဲ့ကြပြီးပါပြီ။
၃။ နိုင်ငံတကာ ကွန်ယက် လုပ်ဖို့ ဆိုတာကြီးကိုလည်း ထောက်ခံကြပြီး ကွန်ယက်တွေ ထူထောင်နေကြပါပြီ။
အခု လိုအပ်မယ်ဆိုရင် အစိုးရသစ်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ဒေါ်စု အသင့် ဆိုတာကိုကျတော့ သဘော မတူ ကြဘူးလို့ သတ်မှတ်ရ မလို ဖြစ်နေပါပြီ။
သူမ သွားနေတဲ့ လိုင်းကြောင်းက အကြမ်းမဖက်သောနည်းနဲ့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှားရေး မဟုတ်ပါလား။
လက်ရှိ အုပ်ချုပ်မယ့် အစိုးရနဲ့ မဆွေးနွေးစေချင်လျှင် ဘယ်သူနဲ့ ဆွေးနွေး စေချင်ကြတာလဲ ဆိုတာ တင်ပြ အဖြေ ရှာကြရန် အထူးလိုနေပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ။ နအဖ လုပ်ရပ် တွေကို ကန့် ကွက် ဆန့် ကျင်တာ၊ ကြေငြာချက်လေး ထုတ်တာတို့ လောက်သာ ရပ်တန့် နေကြတော့မလား။
ပြည်တွင်း သတင်းစာ ဆရာကြီး လူထု ဦး စိန်ဝင်းက ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေး သမား များ အပေါ် သူ့ အမြင်က်ို ပြောဖူးသည်။
အဖမ်းခံ ထောင်ကျ ခံရမည်စိုး၍ ပြည်ပထွက်ပြေးကြသော“ကြောက်ပြေးများ”အရှေ့ လိုလို၊ အနောက်လိုလို လေသမား ဖြစ်နေသည့် ကြောင်တောင်တောင်များ။ ပြည်တွင်းဒုက္ခ အခက်အခဲများပြောဆိုကာ ငွေရပေါက်ရှာနေသည့် ဒီမိုကရေစီ မျက်နှာဖုံးစွပ် အခွင့်အရေး ရနိုင်သူဟူသမျှ သွားဖြဲပြ၍ စားကွက်ရှာ စားဖားသမားများ ။ ကိုယ့်အကြောင်းနှင့်ကိုယ် ပြည်ပရောက်နေပြီး ပြည်တွင်းမှ တကယ်လုပ်နေသူများကို ဆရာကြီးလုပ် ညွှန်ပြ ပြောဆို နေကြသည့် အာပလာများ ဆုိုသည့် ပြောဆို စွပ်စွဲထားချက်ကို ကိုယ့်လုပ်ရပ်က၊ ကိုယ်တိုင် ထောက်ခံမိသလို မဖြစ်ဖို့ လိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် ပြည်တွင်းတွင် ထောင်အကျခံ မိသားစုအရေး အနစ်နာခံကာ“ဘုရင့်နောင်-ဖောင်ဖျက်” တိုက်ပွဲ ၀င်နေသည်ကို တကမ္ဘာလုံးက ချီးကြူး ကြ၊ ဆုတွေ အမျိုးအမျိုး ပေးနေသည်ကို မြင်ကြရသည်။
ဒီနေ့အတိုက်အခံ ဆိုသူ ကျည်လွတ်မြေမှ ရဲရဲ တောက်တို့
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ၏ အတွေးနှင့် လုပ်ရပ်တို့ကို ဆက်လက် ထောက်ခံကြမည်လော။
သို့ တည်းမဟုတ်ဦးဝင်းတင်-- ပြသထားသည့် လမ်းသစ်ရှာ ဖောက်ထွက်ကြမည်လော။
အစိုးရသစ်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ဒေါ်စု အသင့် ဆိုသည်ကို သွေဖီ ဆန့် ကျင်ကြကာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို အသေဆုပ်ကိုင်၍ နအဖအား မဆုတ်တမ်း တိုက်ပွဲဝင် ကြမည်လော ။
မိမိတို့လုပ်ရပ်သည် “ဖိုးသောကြာ ဆောင်းပါး ”ပါအရပြောရသော်-- အာလူးလော။ ခွပ်ဒေါင်းလော သမိုင်းက မှတ်တမ်း တင်ရန် စောင်နေ့ကြလေပြီ။
“ရဲရင့် သတ္တိ နှင့် ပြည့်ဝကာ တိုင်းပြည်အကျိုး ထမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေ”
ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေး ဒုက္ခသည်
Svløptaq Døzi said...
အန်တီစု ကို တောင် ဒီလောက်မြင်နိုင် တယ် ဆိုရင်တော့
အက်ဆစ် က ဗမာပြည် အတွက် အများကြီး အနစ်နာခံပြီးပြီပေါ့နော်
လေးစားစရာကောင်းလိုက်တာ အက်ဆစ် ရယ်
အက်ဆစ်လိုလူ တွေ ကြောင့် မြန်မာပြည်သားတွေနိုင်ငံတကာမှာမျက်နာငယ်နေရ တယ် ဆိုတာ
ခုမှပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်တော့တယ် ကြောင့်
Acid = Lunn Swe
လွှတ်တော်ခေါ်ပြီ၊ အစိုးရဖွဲ့ပြီဆိုပြီး သိပ်မစိုးရိမ် မကြောင့်ကြပါနဲ့။
အခုမှ ဖွဲ့တဲ့ အစိုးရမပြောနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာဖွဲ့ထားတဲ့ အစိုးရတောင် တခဏအတွင်း ပြိုကျနိုင်သေးတာပဲ။
တာဝန်ရှိတာ အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ အန်တီစုမှာပဲ ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ အားလုံးဝိုင်းဝန်းရမယ်။ ပြီးခဲ့တာကို သင်ခန်းစာယူဖို့နဲ့ ထပ်မလုပ်မိဖို့ပဲ လိုတာပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဝိုင်းလုပ်သင့်တာပေါ့။ အပြစ်တင်နေလို့ ပြီးတာမှ မဟုတ်တာ။
ခင်ဗျားတို့ မကြိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးတခုခု ကို ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေက တင်တိုင်း ရန်သူ့လူ ရန်သူ့လူ မပြောပါနဲ့ နအဖနဲ့ တူလွန်းလို့ နအဖကလဲ သူမကြိုက်တာတွေပြတိုင်း ကေအန်ယူ ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုး ဆိုပြီးပြောတာပဲမဟုတ်လား ကြိုက်တာမကြိုက်တာ အပထား အမြင်တမျိုးနဲ့ ကော မမြင်ရဘူးလား အန်တီစုဆိုတိုင်း အကုန်လုံးပြီးပြည့်စုံ နေပြီဆိုပြီး မှန်နေပြီဆိုပြီး ပြောနိုင်ပါ့မလား ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် အကုန်လုံးကို ပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ပါ့မလား ခက်နေတာက ဒီမိုကရေစီလိုချင်လိုက်တာလဲ ငန်းငန်းတက် လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲခွင့်ကြတော့လဲ မပေးချင်ကြဘူး ဘယ်လိုလူတွေပါလိမ့် ကဲ အဲ့ဒီအက်ဆစ် က နအဖထောက်လှမ်းရေးက ရေးတယ်ပဲ ထားပါတော့ လူထုတွေ မဖတ်ရဘူးလား လူထုက ကိုယ့်ဘာသာ မဆုံးဖြတ်တတ်ဘူးပဲ ထင်နေကြသလား မသိတော့ပါဘူး အော်..ခက်ပါ.ကိုယ့်ဖက်ကလဲ သူ့ဖက်နဲ့ သိပ်မထူးသေးသ၍တော့ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပဲ နေမှာပါပဲ။
အက်ဆစ်ရေ မင်းလိုရေးတာလောက်တော့ လူတိုင်းလုပ်တတ်ပါတယ် ဒေါ်စုလို နအဖ ကို အန်တုရဲတာမှ တကယ်သူရဲကောင်း ပြည်ပရောက်မှ ပြောရဲရေးရဲ တဲ့ကောင်တွေက အလကားကောင်တွေ
ီဒေါက်တာလွန်းဆွေ လိုလူတွေထက် လမ်းပေါ်တက်ဆန္ဒပြရဲတဲ့ ပလပ်စတိတ်ကောက်တဲ့ ကောင်တွေကမှ တကယ်သူရဲကောင်း မင်းတို့တွေ နအဖက နိုင်ငံခြားလိုက်ဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့အသံကြားရင် နောက်ထပ် ကမ္ဘာတခုကိုထွက်ပြေးအုန်းမဲ့ကောင်တွေ
၁. နအဖ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အသိအမှတ်မပြု.
၂. နအဖ ဦးစီးပြုလုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကို သပိတ် မှောက်၏.
အထက်ပါအချက်နှစ်ချက်ကို လက်ကိုင်ထားတဲ့ သူ တစ်ယောက်က( နောက်တက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့ ဆွေး နွေး ရန် အသင့်) ပါလို့ ပြောတာက ထိုအချက်(၂)ချက် ကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဆွေးနွေးချင်လျှင် ၉၀ ဖွဲ့စည်းပုံကတည်းက စစ်သား တစ်မတ်သားကို ခွင့်ပြုခဲ့လျှင်.. ခုလောက်ဆို NLD ပါတီကပဲ သမ္မတ ၊ ဒုတိယသမ္မတ ၊ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ တွေပဲဖြစ်မှာပဲ.. သိန်းစိန်တို့ ရွှေမန်း တို့တောင် ရွာပြန်ပြီး လယ်ထွန်ရမဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပြီ.. ကြံ့ဖွတ် လည်း ပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး..
ဦးအောင်ရွှေ နဲ့ ဦးလွင်တို့က သန်းရွှေ ရဲ့ အကွက်ကို မြင်တယ်..ဒါပေမဲ့ DASSK ကို မလွန်ဆန် နိုင်တော့ .....
တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီလို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့သူတွေက သူများကိုသာ ရှာကြံဝေဖန်တတ်ပြီး မိမိကို တစ်ယောက်ယောက်
က ပြန်လည်ဝေဖန်လိုက်ရင် ဆက်ဆက်ခါအောင် နာတတ်ကြတယ်။
အခုလည်း ဒေါ်စုကိုဝေဖန်လိုက်တာနဲ့ ပြူးတူးပြဲတဲနဲ့ ပုဆိုးကွင်းသိုင်း ထမိန်ကတောင်းကျိုက်ပြီး ပြေးလာအော်ဟစ်တော့တာပဲ။ ဆောင်းပါးရေးတဲ့သူကိုပြစ်တင်လိုက် ဆဲလိုက်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ နှစ်ဘက်အမြင်ကိုတင်ပေးတဲ့ ဘလော့ရှင်ကိုပဲ ဝေဖန်လိုက်ပါသေးတယ်။
ဆောင်ပါးရေးသူ အက်စစ်က ဘယ်သူလဲ ဘယ်ဝါလဲ မိမိနာမည်ရင်း နေရပ်ကိုတောင် မထည့်ရဲဘူးလား ဖော်မပြရဲဘူးလားဆိုပြီး ရန်တွေ့သံတွေလား မြင်ရ ကြားရပါရဲ့။ဘလော့ပေါ်က ဆောင်းပါးမဆိုထားနဲ့ နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုရေးတဲ့ မြန်မာ့သတင်းစာထဲက ဆောင်းပါးရှင်တောင်မှ ကလောင်အမျိုးမျိုး ဘယ်သူဘယ်ဝါရေးမှန်းတောင်မသိဘူး။
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာထက် ဆောင်းပါးရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ဆောင်းပါးရဲ့ရေးသားမှုတွေကသာ အဓိကပါ။ဒီတော့ အက်ဆစ်ဘယ်သူလည်းဆိုတာထက် အက်ဆစ်ရေးတဲ့ ဆောင်းပါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသာ အဓိကလို့ဆိုချင်တယ်။
ဒီမိုကရေစီလို့ခေါင်းစဉ်တပ် ကြွေးကြော်ပြီး မိမိရဲ့ဘလော့ မိမိရဲ့ဝက်ဆိုက်မှာ နှစ်ဘက်အမြင် ခံစားနားလည် ရေးပေးတင်ပေးတဲ့ ဘလော့ဝက်ဆိုက်ဆိုတာ အင်မတန်ရှားတယ်။
အစိုးရဘက်ကလို့ပြောလို့ရတဲ့ ဘလော့ဆိုရင် ပိတောက်မြေမှာ နှစ်ဖက်အမြင်ဆောင်းပါးတွေကိုတင်ပေးသလို လွတ်လပ်စွာ ကွန်မန့်ပေးလို့ရတယ်။
ဘလော့ပေါင်းများစွာထဲမှာ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေတစ်ယောက်ပဲ နှစ်ဖက်အမြင်(သို့မဟုတ်)မိမိတို့အဖွဲ့စည်းကို ပြန်လည်ဝေဖန်ဆန်းစစ် ထောက်ပြမှုတွေကို တင်ပေးရေးပေးတာတွေ့ရတယ်။ဘယ်နိုင်ငံရေး
ဘလော့မှ နှစ်ဖက်အမြင်ကိုမတင်ပေးသလို မိမိကိုယ်ကိုလည်း ဝေဖန်စမ်းစစ်ရကောင်းမှန်းလည်းမသိပါဘူး။
ဒေါ်စုလုပ်သမျှ ကောင်းသဗျ ဆိုတဲ့သူတွေကြည့်
အများစုက ကိုယ့်အထင်တွေပဲ မျက်စိတစ်ဖက်ပိတ်ဝါဒ ငါတို့ရေးတာပဲအမှန် ငါတို့ရေးတာပဲ ဖတ်ရမယ်ဆိုပြီး တစ်ဖက်သတ်ဝါဒီတွေနဲ့ အများစာဖတ်သူတွေအမြင်တွေရေးလို့မရအောင် comment တွေပိတ်လို့ပိတ် approval တွေခံလို့ခံ cbox တွေပိတ်လို့ပိတ် မဆိုမဆဲ မရိုင်းစိုင်းပဲ ဘန်းလို့ဘန်း ဒါတွေနဲ့ပဲ ကြုံရတွေ့နေရတယ်။ပြောတော့ ဒီမိုကရေစီ လုပ်တော့ တစ်ဖက်သတ်ဝါဒီ။ပြည်တွင်းက စာပေစီစစ်ရေးကိုတော့ လွတ်လပ်မှုမရှိလို့ဆိုပြီး ဝေဖန်လိုက်သေးတယ်။ကိုယ်တိုင်က ဘလော့လေးမှာတောင် လွတ်လပ်ခွင့် နှစ်ဖက်အမြင်မပေးနိုင်ပဲ ထိန်းချုပ်ထားပြီး သူများကိုသွားပြီး လွတ်လပ်မှုမရှိဘူး သွားပြောနေတာလည်း ဟာသဖြစ်နေတယ်။
သူများကို ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးစေချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီမိုကရေစီကျကျနေထိုင် ကျင့်ကြံနိုင်အောင် ကြိုးစားရတယ်။ကိုယ်တိုင်က ဒီမိုကရေစီမကျပဲ သူများကိုသွားပြီး ဒီမိုကရေစီကျကျလုပ်ပါ သွားပြောလို့ ဘယ်ရမလဲ။
ပြည်သူကိုခေါင်းဆောင်ချင်တဲ့ နိုင်ငံေ၇းသမားတွေဆိုတာ ရင့်ကျက်ရတယ် သိမ်မွေ့ရတယ် ဆင်ခြင်တုံတရားရှိရတယ် သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ် အဝေဖန်ခံနိုင်ရမယ်။
အဘက်ဘက်ကပြည့်စုံနေရမယ်။လတ်တလော မြင်တွေ့နေရတာတွေကတော့ အဲဒီ့အချက်တွေအများကြီးလိုသေးတာတွေ့ရတယ်။
ပြည်နိုင်ငံရေးယောင်ပြတွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကတော့ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်ပါပဲဗျာ။
I can't understand why Lun Swe has posted such article. I suspect that Acid is Lun Swe himself.
ဒီမိုကရေစီကစနစ်တခုဖြစ်တယ်။ မျက်စိပိတ်၊နားပိတ် ပုက်ကိုရေးကိုးကွယ်တဲ့စနစ်မဟုက်ဘူး။
စီးပွါးရေးပိတ်စို့မူ့ (ပြောင်ပြောရရင် အနောက်မျော်ဝါဒ) ကို၊ anylasis မကြည့်ဘဲအလုံးစုံပိတ်စို့ရေးလုပ်တာလည်းနဲ့ဒေါ်စုဘဲ။
advantage နဲ့ disadvantage ကိုမကြည့်ဘူး။ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေဘမာပြည်ကိုမလာပါနဲ့စိုပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိတ်စို့တာလည်းNLDဘဲ။
ဒီလို ဝေဖန်တာမျိုးကို နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝေဖန်တဲ့သူက ကိုယ်ထင်ပြဖို့တော့ လိုပါတယ်။ မင်းကိုနိုင်လို၊ ကိုကိုကြီးလို နိုင်ငံအတွက် အနစ်နာခံပြီး တကယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လူငယ်တွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အကြံဥာဏ်ကိုလည်း အမေစုအနေနဲ့ လေးစားစွာ အသိအမှတ်ပြုမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ သူတွေသာ ဘာလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြား သိနိုင်မှာပါ။ ကျနော့်အမြင်တော့ အမေစုကို တာဝန်မကျေဘူးလို့ ပြောသူတွေဟာ ကိုယ်တိုင် တာဝန်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ မသိကြတဲ့ သူတွေ များပါတယ်။
ဟေ့ မကျေနပ်ရင် ခင်ဗျားတို့ ဦးဆောင်ပြီး ထွက်ပါလား၊ ဘယ်နှယ် ဘေးကနေပြီး အော်နေတာ။ မောင်လွဏ်းဆွေ ခင်ဗျားလည်း လေအိုးအက်ဆစ်ကို ထောက်ခံရင် မြန်မာပြည် ပြန်ပြီး ဆန့်ကျင်ပွဲ လုပ်လေဗျာ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ကလေးကစားစရာ မဟုတ်ဘူးဗျာ့။ ပညာနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ပုတ်ခတ်နေရအောင် ခင်ဗျားတို့မှာ နိုင်ငံရေး ပညာတွေ ဘယ်လောက်ရှိလို့လဲ။ အလကားကောင်တွေ ပြည်ပကနေ လေထိုးဖို့ ပဲ တတ်တယ်။
တော်တေ်ာ့ အသုံးမကျတဲ့ nld
(သိပ်ထူးထူးထွေထွေ ရေးမနေပါနဲ့ တော့ဗျာ။ကျနော်လုပ်သလို copy ,paste လုပ်လိုက်။ ခင်ဗျားလက်ညောင်းသက်သာတာပေါ့။)
ဒေါ်စုကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လျှောက်ပြောနေတော့ အညာစုမှာ ဒေါ်စု အစာငတ်ခံတော့ ကိုရင်တို့အဲဒီတုန်းကဘာလုပ်နေလည်း မေးပါရစေဥိး။ ဓနုဖြူမှာ ကံကြီးလို့ ကျဉ်သင့်မယ့်ဘေးကသီသီလေးလွတ် သွားတုန်းကရော။ ဒီပဲယင်းတုန်းကရော ။ ယောကျာ်းသေတာတောင်မပြန်ပဲ သားတွေကိုရော စွန့် ပြိး ဒီလောက်စွန့် ထားတဲ့ မိန်းမကြီးတယောက်ဆီက ဘာတွေများထပ်ပြီး ကိုယ့်လူတို့ က လိုချင်နေသေးတာတုန်း။ လူတယောက်ဆီ ကဘယ်လောက်တောင် တောင်းဆိုချင်နေကြတုန်း။ ခုလို ဒေါ်စုကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လျှောက်ပြောနေတာ ခင်ဗျားတို့ မရှက်ဘူးလား။တိုင်းပြည် အပြောင်းအလည်းဆိုတာ အဲဒိတိုင်းပြည်ကလူအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်။ ဒေါ်စုတယောက်ထည်းနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်သလို nld တပါတီတည်းနဲ့လည်းဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဆံပင်တွေ ဖွေးဖွေးလှုပ်နေတဲ့အဖိုးကြီးတွေနဲ့သာဆိုင်တာမဟုတဘူး။မြန်မာပြည်ကလူထုကမဖြစ်မနေ ငါတို့ပြောင်းလည်း မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးရှိလာ တဲ့အချိန် မုချပြောင်းမှာပဲ။ မပူနဲ့။ ဗိုက်ကြီးသည်မွေးရမယ့်အချိန်တန် ရင်မဖြစ်မနေညှစ် တာပဲ။
အသင်းက ကက်ပတိန်က အထုတ်ခံထားရတယ်။ အသင်းသားတော်တေ်ာများများကလည်း အ၀ါကတ်တွေ အနီကတ်တွေထိ။ ခြေကျိုးတဲ့သူကကျိုး။ နအဖအသင်းကလူချ တယ်လေ။ ဒိုင်ကလည်း ခေါက်ဆွဲစားထားတယ်။ လူချချင်သလောက်ချ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေ တယ်။ ဒီပွဲကြီးကမလှဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ် နေပုံ ကတော့ nld အသင်းကဂိုးမသွင်းနိုင်တိုင်း ပရိသတ်က nld ကိုဆဲတယ်။မတရားအထုတ် ခံရတဲ့ ကတ်ပတိန်ကိုအပစ်တင်တယ်။ ဒီလိုဒေါင့်ကန်ဘောလေးသွင်းလိုက်ပါလား။ ဒီလိုလိမ်လိုက်ခေါက်လိုက်ပါလား။ ညံ့လိုက်တာ ဒီတလုံးက သေချာပေါက်ဝင်ရမယ့် ဂိုး။
တရားမျှတတဲ့ ဒိုင်လူကြီးနဲ့ သူတင်ကိုယ်တင်အကြိတ်အနယ်ကန်ကြရတဲ့ ပွဲမျိုးမှာ ကိုယ့်လူက အသုံးမကျလို့ အပစ်တင်အော်ဟစ်ဆဲဆို တာမျိုးကို ဘာမှမပြောလိုဘူး။ ခုလို အကျပ်အတည်းနဲ့ မတရားတဲ့ အနေအထားတခုမှာ ကပ်ကပ်သတ်သတ်လုပ်နေရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ တော့ဗျာ မြင်ကွင်းကအရှင်းကြီးပဲ။ လူချခံနေရပါတယ် ဆိုမှ မတရားလုပ်ခံရတဲ့ သူကို နင်ညံ့လို့ဆိုပြီးအပစ်တင်နေတာကတော့ သ်ိပ်မတော်ပါဘူး။
ပရိသတ်အနေနဲ့ လုပ်သင့်တာကတော့ မတရားလူချနေတဲ့ နအဖကက်ပတိန်ကို ပွဲကြည့်စင်ကနေလောက်လေးခွနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပစ်ဖို့ ပဲ။ လူချနေတဲ့ခြေထောက်ကို နောက်မချရဲအောင် လောက်လေးခွနဲ့ ပစ်ဖို့ ပဲ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း အက်ဆစ်တခွက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် လှမ်းပက်လိုက်ဖို့ ပဲ။ ဟဲဟဲ
အညာစုမှာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပြီး လူထုကိုတိုင်မင် ပေးတုန်းက ဘယ်လူထုက ဒေါ်စုကိုဝိုင်းရံဖို့လမ်းပေါ်ထွက် လာကြလို့ တုန်း။အတွေးမခေါင်စမ်းပါနဲ့ ။
ဒေါ်စုက လမ်းပေါ်ထွက်ကြလို့ ပြောတာနဲ့ လူတွေ လမ်း ပေါ်အလျှိုအလျှိုထွက်လာကြမယ်လို့ ထင်နေရင်တော့ တော်တော်ဒုံးတာပဲကိုယ့်လူ။ ဒေါ်စု ပြောတိုင်းလူထုက လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီရတာ ကြာလှပေ့ါ။
ပြောသာ ပြောရတယ်။ဒေါ်စုထိလို မချိအောင်နာ တယ်လို့ ထင်မှာလည်း ကြောက်ရသေး။ ဒေါ်စုကိုထားပါ။ ဘုန်းကြီးတွေရှေ့ ကနေ ရဲရဲရင့့် ရင့်ထွက်လာတဲ့ စက်တင်ဘာမှာ ၈၈ တုန်းကလို တပြည်လုံးအုံးအုံးကြွက်ကြွက်ဖြစ်သင့်တာမဟုတ်လား။ဘာလို့ မဖြစ်သတုန်း။ ၈၈ လို အရေးအခင်းမျိုးဟာ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲဆိုတာဘယ်တော့မှ မမေ့နဲ့ဗျို့ ။ ဒေါ်စုက ကခိုင်းတိုင်းလူတွေလိုက်လုပ် မယ်ဆိုတဲ့ ကြောင်တောင်တောင်အတွေး တွေလည်း ခေါင်းထဲ ကမြန်မြန်ထုတ်လိုက်ဗျို့ ။
တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးက လှလည်းလှတယ်။ပြောလို့ လည်းကောင်းပါတယ်။ ရရင်ရမရရင်ချဆိုတော့ ဘာနဲ့ ချရမှာတုန်း။
ဒီလောက် ကွန်မန့်တွေထိ လိုက်ပြီးရှည်လျားလိုက်နေလိုက်မိတာက သန်းရွှေကို ဆော်ရမယ့်အစား ရေလိုက်လွဲနေတာကို စိတ်ထဲအစာမကျေလို့ပဲ။nld ပါတီကိုထိလို့ နာရအောင် nld ပါတီဝင်မဟုတ်သလို ဘယ်ပါတီမှဝင်ဖို့ စိတ်ကူးလည်းမရှိဘူး။
အာဏာရှင်ကို ဖိနပ်နဲ့ပစ်ပစ် သေနတ်နဲ့ ပစ်ပစ်ဗျာ ထောက်ခံတယ်။ သေနတ်ဆိုတာကလေးကစားတဲ့ ရေပွတ်သေနတ်နဲ့ပစ်ပစ် လေသေနတ်ပဲပစ်ပစ်။
ဖြစ်ပြီးတာတွေပြန်ပြောပြီးအပြစ်ရှာဖို့ကအင်မတန်လွယ်တာပေါ့။ ဘယ်သူ့ အပြစ်ကိုရှာပြရမလည်း။
nld လား။crppလား။absdfလား။ တောခိုတဲ့သူတွေလား။ncgub လား။ ncub လား။ မင်းကိုနိုင်လား။ဒေါ်စုလား။မိုးသီးလား။ဒေါက်တာလွမ်းဆွေလား။
lunswe u spoil urself. u madeamistake . and u write ur own history ,by posting this mother-fucking bastard's article. what is that mother fucker. write his background first with true name n challage daw su.acid go n suck than shwe dick n u get some stolen bloody money.
ဒေါသသံ မပါပဲ အချက်အလက်တွေပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နဲ့ထောက်ပြနိုင်ရင် ပိုတန်ဖိုးရှိမယ်ဗျ။
၁၉၈၈ မှာ ဦးနု က ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့ဖို့ အကြံပြုတာကို ဘာဖြစ်လို့ ပယ်ချခဲ့ကြသလဲ ။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပြီးတော့လည်း တရုတ် နဲ့ အိန္ဒိယ သံရုံး တွေက NLD အစိုးရ ဖွဲ့ရင်
အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ကြေညာမယ်လို့ ကတိပေးတာတောင် အစိုးရ မဖွဲ့ပဲ ဘာဖြစ်လို့
နဝတ လုပ်တဲ့ အမျိုးသားညီလာခံ ကို တက်ခဲ့တာလဲ ။ နောက်ဆုံး ၂၀၀၇ မှာ သံဃာတော်တွေ
ထွက်ပြီး ဦးဆောင်တာတောင် ပြည်သူတွေက ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားခဲ့တဲ့ NLD
က ဘာဖြစ်လို့ကုပ်နေခဲ့တာလဲ စတာတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တာပဲ
အကို ။ ကျနော် လည်း အန်တီစု ကို ချစ်ခင်လေးစား တဲ့ အထဲမှာပါပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ထောက်ပြစရာရှိရင်
ရဲရဲရင့်ရင့် ထောက်ပြရဲတဲ့ သတ္တိရှိဖို့လိုတယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက် အသက်နဲ့ဘဝတွေ ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူလူထု ကို တာဝန်မကျေဘူးလို့ ပြောရင် ဒါဟာ
ပြည်သူလူထု ကို စော်ကားတာပဲလို့ ကျနော်မြင်ပါတယ် ။
ဒေါ်စုပြောတာတွေဖြန်ဖတ်။ လီးလိုလိုးမိုလိုလိုကြီးဘဲ။ ဘာပြောချင်တာလည်း။
ရှင်းရှင်းပြော။ တိုက်ရမာလား။ ခံပေးရမာလား။
(ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဆိုတာ နအဖ ၇ဲ.သူလှို၊ဒလန်ဆို
အောက်ပါ comment တို့ ကိုဘာကြောင့်ဖျက်သလဲ?
(ရိုင်းစိုင်းသော စာများကို ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ မှ တင်မပေးရန်..မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ comment တိုင်းတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအတိုင်းသတင်း Blog အားလုံး တညီတညွတ်ထဲ ရိုင်းစိုင်းယုတ်ညံ့သော comment များကို ဆန့် ကျင်သင့်ပါပြီ။ C-box ပိုင်ရှင်blog ပိုင်ရှင်များ အားလုံးကို တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ဤ သည်မှာ ဒီမိုကရေစီ လည်းမဟုတ် ၊ ယုတ်ညံ့သောအပြုအမူဆိုးသက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။လုံးဝအားမပေးသင့်ပါ။
ကောင်းမွန်စွာ ၊စိတ်ပါဝင်စားစွာ တက်တက်ကြွကြွ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးကြသူများအတွက် ၊ အလွန်တရာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရပါသည်။
cးတာomment post တိုင်းတွင် ဆဲ စာ တလုံးတပါဒ ပါလာသည်နှင့် တင်မပေးသော စည်းကမ်းစနစ် ကို
မြန်မာ site တိုင်း ကျင့်သုံးသင့်ကြပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။)
နောက်တခုက NLD ကိုဝေဖန်ထားတာ...
ဘာလဲ..မှန်လို့ နာသွားတာလား ..?
သစ် ပင် စိုက် မယ် ရေ လောင်း မယ် ..... ဘုန်း ဘုန်း ဆွမ်း လောင်း မယ်.....
ဘုရား မှာ ဆု တောင်း မယ်..... ဘတ်ဒေး ပေး ကြ မယ်
ဘတ်ဒေး ပေး ကြ မယ် ဘတ်ဒေး ပေး ကြ မယ် (ဟေ.)
ဘတ်ဒေး ပေး ကြ မယ်
လောင်းထမ်း ပလင် ( long term plan )
လောင်း လောင်း ထမ်း ကြ မယ်.....Let's go long term plan...!
theik le sate pu ma nay gya bar net....dar bar be...!)
ဝေဖန်ရေးကြောက်ရင် blog မလုပ်နဲ့ မောင်လွဏ်းဆွေ ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဘက်ကနေ ကြည့်ရင် ကောင်းပါသည်။ အမေစုကိုယ်တိုင်လည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လို့ အကောင်းဘက်ကနေ ဒီပိုစ်ကို ကြည့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ သို့သော်..မကျေနပ်တိုင်း မခံမရပ်နိုင်တိုင်း ဖြေမဆည်နိုင်တိုင်း ဒို့အရေးလို့ လမ်းပေါ်ထွက်ကြရုံဖြင့် နိုင်ငံရေးမည်သတဲ့လား။ ကာလံ ဒေသံနှင့် ဝေဖန်ကာ စဉ်မသင့်လျင် မင်းပေါ်နှင့်ဦး ဟူသော အဆုံးအမတိုင်း ကာလ၊ ဒေသကို ချင့်ချိန်ကြရသည်ဟုထင်ပါသည်။ အခု ဖြစ်ပျက်နေသော အီဂျစ်တွင် အီဂျစ်ပြည်သူတို့ လမ်းပေါ်ထွက်မှ လက်ရှိခေါင်းဆောင်ဟု ထင်ပေါ်လာသော နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ပေါ်လာပါသည်။ ပြည်သူမပါဘဲ သူ မည်သို့မျှ အီ၈ျစ်သို့ ပြန်လာ ဆန္ဒမပြနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အထင် ထို နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်သည် ကာလဒေသကို ကြည့်ပြီး လှုပ်ရှားသည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ပင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည်လည်း ကာလဒေသကို ချိန်ကိုက်ရပေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုသည် အမေစုကို ကိုးကွယ်သူမဟုတ်ပါ။ အန်အယ်လ်ဒီကိုလည်း ရှိခိုးသည်မဟုတ်ပါ။ ကြားမြင်ဝါဒဖြင့် မြင်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မတူကွဲပြားခြင်းများကို လက်ခံတတ်သည်ကိုက ဒီမိုကရေစီ မည်သည် မဟုတ်လား။
မြန်မာပြည်က နိူင်ငံရေးကို ကြည့်ရတာ အိန္ဒိယက ကုလားကားတွေကို ကြည့်နေရသလိုဘဲ။ ဇာတ်လိုက်ကိုဗဟိုပြုတဲ့ဝါဒ ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေကြပြီ။ ဒေါ်စုကလေ့ သူ့အဖေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်မို့လို့ သယောဇဉ်တောရှိမှာပေါ့။
မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေးမှာ အကြိမ်ကြိမ် ဓာတ်ကြမ်းတိုက်ခဲ့ ပြီးပြီ။ ဘာထူးလာလဲ။
အရေးတော်ပုံ တွေ။ တော်လှန်ရေး တွေ။ လက်နှက်ကိုင် တိုက်ပွဲ တွေ။ အုံကြွမှု တွေ။
ဗကပ။ ဗကသ။ ABSDF, NLD, NCGUB, NDF, KNDO, KNU, KNLA, KIA, SSA, DKBA, ABCDEFG... XYZ
ကိုလိုနီ။ဖဆပလ ပျူစောထီး။ နေဝင်း။ မဆလ။စိန်လွင်။ မောင်မောင်။စောမောင်။ သန်းရွှေ။ သိန်းစိန်။ သောင်းပတ္တမြား။ ထောင်နီလာ။ ရာဥသဖရား။ ဆယ်ကျောက်စိမ်း။ ...
မတရား ကျွန်ပြုခံ နိုင်ငံ။ ပထွေး လက်ထက်က စည်းစိမ်။ အရှေ့တောင် အာရှရဲ့ကျား။ ပြည်တွင်းစစ်။ ကွန်မျူနစ်။ တိုင်းရင်းသား မကျေနပ်မှု။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်။ ဆိုရှယ်လစ်။အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံ။ 88။ သူတောင်းစား နိုင်ငံ။ မယားငယ် နိုင်ငံ ။ ကျေကျေနပ်နပ် ကျွန်လိုက်ခံ ကျွန်ရင်းငှါး နိုင်ငံ။ ဖာ နိုင်ငံ။ဖာလိုက်ခံ နိုင်ငံ။..
ယုံကြည်ချက် နဲ့အသက်ပေး နိုင်ငံရေး။ မုဆိုးမ နိုင်ငံရေး။ ထင်ရာစိုင်း နိုင်ငံရေး။ ဆွမ်းကြီးလောင်း နိုင်ငံရေး။ မဲမဲ မြင်ဝိုင်းကိုက်နိုင်ငံရေး။ အရိုးမြင် ဝိုင်းလုနိုင်ငံရေး။ သရေတများများ နိုင်ငံရေး။ တော်သလင်းလ နိုင်ငံရေး။
လုပ်ကျပေါ့ ဗျာ။ ခင်ဗျား တို့က အရပ်ပျက် သူရဲကောင်း တွေဘဲ။ ဒီမိုကရေစီ မြင်းပျံ ကြီး မစီးခင် အောက်ကိုတချက် ငုံ့ကြည့်။ အထီး လား အမ လား သိအောင်လေ။
ဟားဟား..ဘာတွေများရေးထားလဲလို့မျက်စိတောင်ညောင်းသွားတယ် နိုင်ငံရေးလုပ်စားတဲ့လူတွေ စားမံခုတ်နေကြတာပါလား
ကမ္ဘာသြဇာရှိဆုံးအမျိုးသမီးစရင်းဝင် ဆုပေါင်း၁၀၀ကျော်ရနေသောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံကဗိုလ်ချုပ်တွေကိုတော့ ကိုယ့်လင်ယောက်ကျားကိုပြန်ပေါင်းဖို့မျက်နှာချိုသွေးနေရတဲ့ ဇနီးမယားလိုဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်စိတ်ပေါက်နေတဲ့ဗမာတွေက ကို ယ့် ထွက်ပေါက်ကိုရှာပြီး သခင်အားဘဲကိုးဘဲနေတာ ဗမာတွေကိုထိုင်းတွေက ကျွန်လို့ တောင်မသုံးတော့ဘဲ စပ် လို့ ခေါ်တယ် (ထိုင်းလိုခွေးတရိဆန်)ဟုတ်ပါတယ်ကြာရင်စကားမပြောတတ်တော့ဘဲ ကျွန်စကားပြောကုန်ကြမယ် ဒါကိုနောက်နှစ်ပေါင်း၂၀၀အတွက်မျိုးစေ့ချနေရင် ထိုအချိန်မှာ ဗမာဆိုတာ မီးခွတ်ထွန်းရှာရတော့မယ်
ကမ္ဘာသြဇာရှိဆုံးအမျိုးသမီးစရင်းဝင် ဆုပေါင်း၁၀၀ကျော်ရနေသောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံကဗိုလ်ချုပ်တွေကိုတော့ ကိုယ့်လင်ယောက်ကျားကိုပြန်ပေါင်းဖို့မျက်နှာချိုသွေးနေရတဲ့ ဇနီးမယားလိုဖြစ်နေတယ်။ဟိုဘက် ကသူ့အကြောင်းစိတ်မ၀င်စား စကားတောင်မစတော့ ပွဲလမ်းတွေတက်ပြီးဟန်ရးသာပြနေတော့တာဘဲ ..ကဲဗိုလ်ချုပ်သွေးဆို ရဲရဲစိတ်ခေါ်လိုက်လေ-ဘာလို့ ဒီတကြိမ်မှာ စိတ်နဲ့ မပြစ်မှားရဲတာလဲ မူမမှန်ရင်တော့ပြောမှာရေးမှာဘဲ စိတ်ကူးနဲ့ ဝင်ကြီးချုပ်လုပ်မနေပါနဲ့ကျုပ်တိုးအားလုံး လည်ပင်းမှာကြိုးချီပြီး သံကြိုးတွေနဲ့ နေရမယ့်ဘ၀ရောက်တော့မယ်။
ဒီတပါတ်အက်စစိက ရေ၀င်သွားလို့ နည်းနည်းပျော့သွားတယ်
အားလုံးက ပါးပါးလေးနဲ့ ဖေါဖေါနိုင်ငံရေးသွားနေတာ ဝေဖန်လည်းမနာတတ်ပါဘူး ။ခေါင်းဆောင်တချိန်က လုပ်ခဲ့တာ ကိုစားမြုပ်ပြန်ဂုဏ်ယူနေလို့ မရဘူး လက်ရှိအခြေအနေက ကျွန်ဘ၀ကမလွတ်သေးဘူး စစ်တပ်သာပိုကြီးထွားလာတာကို သတိထားမိရင် တို့ ခေါင်းဆောင်တွေ social politicလုပ်နေလဲအပိုဘဲ ဘာကြောင့်ဆက်မ တိုက်ကြသလဲ?????ခုချိန်မှာ ပြည်တွင်းပြည်ပက နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲဝင်မယ်သူတွေစုရပ်တခုခုပ်ဖို့ ပြောပါလား လေလိုင်းရောအင်တာနက်ရော မကြားချင်အဆုံး ခလေးနဲ့ ရာ လူပေါင်းစုံနဲ့ စကားပြောမိန့် ခွန်းတွေချွေလို့e-ကွန်ရက်က မြန်မာပြည်မှာသုံးမရပါဘူးနောက်အနှစ်၁၀၀လောက်
စောင့်ဆို့မယ်တော်ကြီးနတ်နန်းမှာ နတ်ကတော်တွေကတဆင့် အမှာစကားပါးရတော့မှာဘဲ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေချည်းပဲ ဖတ်နေရသလိုပဲ။ တကယ်ဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော အခု ကိုယ်ဝေဖန်နေသူတွေရဲ့ နေရာမှာ ရောက်ရင် ဘယ်လို လှုပ်ရှားကြမလဲ။ ပြန်စဉ်းစားသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်တိုင်းပြည်မှ ခေါင်းဆောင်တွေချည်းကြောင့် လွတ်လပ်ရေးမရခဲ့ပါဘူး။ ပြည်သူတွေချည်းပဲလည်း မဖြစ်ပြန်ဘူး။ ပြည်သူနဲ့ ခေါင်းဆောင် ဟန်ချက်ညီဖို့လိုပါတယ်။ အခုချိန်မှ အရင်က ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်လည် ပြောနေမယ့်အစား / ပြည်ပကနေ လက်ခုတ်လက်ဝါးတီးနေကြမယ့်အစား / ဝေဖန်လေကန်နေကြမယ့်အစား အထဲပြန်ဝင် ကြိုးစားတော်လှန်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဘယ်သူ့အပြစ်မှ မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးအပြစ်ပါ။ တကယ့်နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ပြည်တွင်းမှာ ဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီး ရသလောက်လေးကို အခြေပြုပြီး အခွင့်ရေး ပေးရင် ပေးသလောက် လုပ်ကြမယ့်သူချည်းပါ။ ဝေဖန်လေကန်နေရုံနဲ့ ရွှေပြည်ကြီးဟာ ရွံ့ပြည်က လွတ်မည်မဟုတ်ပါ။ ညီညွတ်ကြဖို့ အချိန်တန်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း
ကိုမြင့်ဇော် ပြောတာမှန်တယ်ဗျ ခုဟာက မိန်းမသားတစ်ယောက်ကို ယောင်္ကျားကြီးတစ်ယောက် ပုဆိုးခါးတောင်းကျိုက်ပြီး ရန်တွေ့ သလိုဖြစ်နေတယ် အကိုပြောသလိုပဲ တစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ သူလဲ ၁၃ နှစ်နီးပါ အချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရတာ သူ့ ကိုလဲကိုယ်ချင်းစာသင့်ပါတယ် အားလုံးညီညွတ်ရမယ့်အစား စားကောင်းသောက်ကောင်း ထအော်သလိုဖြစ်နေတယ်
Stankin ဆိုသောမိတ်ဆွေက ''အက်ဆစ်ရဲ့ ချီး ဒေါ်စုစားသင့်တယ် ''ဟု ကော်မန့်တ်ရေးသွားတာကို ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းပါ။ ကိုယ်နဲ့ ယုံကြည်ချက်မတူတိုင်း မရေးသင့်ဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။ ခုနက မိတ်ဆွေရဲ့ ပရိုဖိုင်ကို ကလစ်ကြည့်တော့ ရုရှားမှာ ပညာသင်နေတဲ့ဘော်ဒါတွေထဲက ဖြစ်တာ တွေ့ရတော့ ပိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဗျာ။ ကိုယ်နဲ့ ယုံကြည်ချက်မတူသူတိုင်းကို အဲလို ရိုင်းပြတာတော့ နောက်တစ်ချိန် တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ပေးမယ့်သူတစ်ယောက် (အုပ်ချုပ်မည့်သူမဟုတ်ပါ)အနေနဲ့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အခုကတည်းက မိတ်ဆွေရဲ့ဘလော့မှာ ရေးထားတဲ့ ပိုစ်တွေလို ယဉ်ကျေးပါစေ။ ပြည်သူကို အလုပ်ကျွေးပြုတဲ့ စစ်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ကြိုးစားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။
ပူမနေ ပါနဲ့ဗျာ။ ၈၈ တွေ။ သံဃာ့ အရေးအခင်းတွေ။ ဘဝပျက်တာတွေ။ ဇာတ်ပျက် တာတွေ ။ တာဝန်ကျေတာတွေ။ မကျေတာတွေ မေ့လိုက်တော့။
ဆိုပါတော့ ဗျာ။ ၁၁/၁၁/၁၁ မှာ ဖုန်းမော် ဆယ်ယောက်သေပီး ၈၈ ထက် ဆယ်ဆကြီးတဲ့ လူထုအုံကြွ မှုပေါ်လာပါစေအုန်း။
အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု တွေအောင်ပွဲမရ နိုင်ဘူး။
မတော်တဆ အောင်ပွဲ ရခဲ့ရင်တောင် ဒီမိုကရေစီ မရနိုင်ဘူး။
အာဏာရှင် လက်လွှဲ တာလီဘန် အစိုးရ ဘဲရမယ်။
ငယ်ငယ်က ကျူ:ဘားတော်လှန်ရေးကို လေးစားပေ မဲ့ ကတ်စထရို တော့မလို ချင်တော့ဘူး။
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ တိုက်ယူရမယ်ဆိုတာထက် ခေါင်းဆောင်တွေ ပြည်သူတွေရဲ့ သွေးသားထဲ အရင် စိုက်ယူဖို့ လိုတယ်။
အဘေးက မင်းတုံးမင်း ကိုယ်လုပ်တော် အနွယ်။ အဖိုးက အလိုတော်ရိ ကျွန်။ ဘကြီ:က သခင် ဖြိုးတုတ်။ အဖေက ဗျူရိုကရက်။ ဦးကြီးက တောထဲကျ။ ဦးလေးက အလံနီ အလင်းဝင်။ အကိုက ခုနှစ်တန်းမှာ တောခို။ အမက ယုနန္ဒာမြင့်။ ကျွန်တော် က အမေရိကန် စကော်လာ ဘလော့ကာ။
ကဲ ဘာလိုလဲ။ ဒါ သွေးသားထကြွ မှုမဟုတ်ဘူး။ အသွေးအသား ထဲကတော်လှန်ရေး ဗီဇ။ ဒီမိုကရေစီ မရအရ ယူမယ်။အတင်း အဓမ္မ ယူမယ်။ တိုက်ယူမယ်။ဖိုက်ယူမယ်။နှိုက်ယူမယ်။ကိုက်ယူမယ်။
တိုက်ပွဲ ဒီနေ့စမယ်။ မနက်ဖြန် ဒီမိုကရေစီ ရရင် ဘာလုပ်မလဲ။ သန်ဖက်ခါပြန်အိပ်နေမှာပေါ့။
ကဲမြင်တဲ့အတိုင်း အခြေအနေ တွေအားလုံးကတော့ ကိုယ့်ဘက်မှာဘဲ။ အဖွားကြီး က မျက်စ မပစ် သေးလို့။
နို့မို့စို ဒီမိုကရေစီ ရတာကြာပေါ့။
To Acid , Spam
you don't even dare to said your real name and address. how did we believe you. whatever NLD did, SPDC put them in jail . Do you understand that. Put your shoes in DAW AUNG SAN SU KYI .
How many years she lived with her family from 1989 ?
Aspecially, with her sons. you should have asked your mother if she lived without seeing you many years, how would she feel.
I am notaNLD . nether any political party include my family. i never did any political. i can not do anything , i did not say anything to NLD.
if i have to said something to you , it is only two words that fuck you.
ပြည်သူတွေ တာဝန် (ကျေခဲ့/ ကျေ) ပြီတဲ့လား?
အဲဒီလိုတွေရေးထားတာဖတ်ရတိုင်း အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရတယ် … အဲဒါဘာအဓိပ္ပါယ်မှန်းကိုမသိဘူး
ဘာကိုဆိုလိုချင်မှန်းလဲမသိဘူး … အရေးအခင်းဖြစ်လို့ လမ်းပေါ်ဆန္ဒထွက်ပြတယ် … ပြီးတော့လည်း ကိုယ့်ဘေးမှာ မတရားတာဘာဖြစ်ဖြစ် ဂရုမစိုက်ဘူး … နေတတ်သလိုနေလိုက်တယ် … အဲဒါမျိုးကို ပြောတာလား တာဝန်ကျေတယ်ဆိုတာ …
တာဝန်သိစိတ်၊ တာဝန်ယူစိတ် ဆိုတာ ခဏလေးထားရတဲ့ ဟာမျိုးမှ မဟုတ်တာ … တစ်ချိန်လုံး စိတ်ထဲမှာ ရှိနေရမဲ့ ဟာမဟုတ်ဘူးလား
၁။ မိဘ နဲ့ သားသမီး အပြန်အလှန်ထားရှိတဲ့ တာဝန်ယူမှုမျိုး
ဘယ်သူကမှခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူး … အသွေးအသားထဲကကိုဖြစ်နေတာမျိုး …
အဲဒီလိုမဟုတ်တဲ့ မိဘ/သားသမီး ကို မိဘကောင်း/သားသမီးကောင်းလို့ပြောလို့ရသလား?
မိဘ/သားသမီး တာဝန်ကျေတယ်လို့ပြောလို့ ရသလား?
၂။ ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက် ငါးပါးသီလကို စောင့်ထိန်းသလိုမျိုး
ဘယ်သူကမှဖျားယောင်းသွေးဆောင်ဖျက်ဆီးလို့မရဘူး … တစ်သက်ပါတ်လုံး တည်မြဲနေတာ
အဲဒီလိုမဟုတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်း လို့ပြောလို့ရသလား?
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ လိုက်နာရမဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေကို ကျေပွန်စွာလိုက်နာတယ်လို့ပြောလို့ရသလား?
၃။ ဘောလုံးသမားကောင်းတစ်ယောက် ဘောလုံးကန်နေတုန်း မိနစ် ၉၀ လုံး အာရုံစိုက်မှုမျိုး
အနိမ့်ဆုံး ဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပါ … ၁၀ မိနစ်လောက်ပဲ အာရုံစိုက်ကန်ပြီး ကျန်တဲ့မိနစ် ၈၀ လောက် ကောင်းကောင်းမကန်ရင် အဲဒီဘောလုံးသမား အဲဒီပွဲမှာ တာဝန်ကျေတယ်လို့ပြောလို့ရသလား?
မက်ဆီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရော်နယ်ဒိုဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလိုကန်နေရင် ဘောလုံးသမားကောင်းတစ်ယောက်တာဝန် ကျေတယ်လို့ ပြောလို့ရသလား?
My friend Lwan Sway,
I just surprise that your blog become post like "Padokmyay".
If acids or bases or whatever idiots post on their blogs, I'd say anymore.
Be mind my friend. I don't think you would become "Padok Lwan Sway.
Once your firend,
Saw Kyaw Lay Thwel
Dear Ko Acid,
You are right and we are informing to NLD and DASSK by the proper channels.
1. The SPDC is not like other Government.
2. Must take momentum for nesxt steps.
3.Some of MPs are not Politicians and just achieved the MPs post in 1989-90.
4. DASSK also consdidering the RESULT of 2nd. Panlong - will get National Unity and and already got the National Unity in 1947,1992,1997 and very recently when 2010 election and done by all Kachin, Kayen, Chin even Wa and Kokant and alot of unnamed forces.
5. Those STRENGTH are NLD forces but NLD still not declared yet those are POWER of Public.
6. The 1990 election is the still alive before formed the Parliament can declare as "INTERIM" Government and we have Constitution, Flag and Seat at UN and EU.
7. NLD is urging to Public - This is NOT effective way and NLD can reach the GOAL of Democracy by the setting-up Paralle Government position and UN_SECURITY is still waiting the RIGHT WAY of Approach to UN.
8. We also appreciate to KO ACID and must inform to oour leaders by the proper ways and must do together inside in Burma.
"So, we are inviting to all leaders and Public to against unjustic 2010 and election result
and apprereance of the SPDC/USDA/Killers Government."
We apologize to ALL to pay each of RISK scale and individual or group attempt at the same time in future.
We have the RIGHT and GOD together with Monks and Public.
All must understand and CHEATING of SPDC 1962-1988,1988 to 2010 are more than 48 years ready and Education are nLOWEST and Economic are the last of world countries. But the TECHNIC of Steling are the FIRST of world lists.
Sincerely and respect to all our leaders inside and out side of Burma.
အက်စစ် ကတော့ လာစားနေပြန်ပြီ ဒါမျိုးဝင်ပြောဖို့ အချိန်မရှိပေမယ့် ပြောရဦးမယ်...။
၁)ကိုယ်တိုင်လုပ်မကြည့်ပဲ ပွားနေတာ အလကားပဲ
၂)အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကို ဘယ်သူမှ တစ်ယောက်ထဲလုပ်လို့မရဘူး မင်းကိုယ်တိုင်ပါဖို့အရေးကြီးတယ် ၊မင်း..တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်ခဲ့လား၊လုပ်နေဆဲလား၊ဆက်လုပ်ဦးမလား မင်းကိုယ်မင်းစဉ်းစား
၃)မင်းနဲ့တန်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ပဲ မင်းစိတ်ထဲမှာ ရနေတာ ကိုဝမ်းမနည်းနဲ့ အဲဒါမင်းနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်၊မင်းရဲ့ ရေချိန်ပဲ..။
၄)အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့(မီဒီယာ)လွတ်လပ်ခွင့်ကို ခုတုန်းမလုပ်နဲ့ ပြောရဲယင် ပေါ်တင်ပြော၊သတ္တိရှိယင် ဘယ်နေရာ၊ဘယ်တိုင်းပြည် ပဲရောက်ရောက် အခုလောလောဆယ် မင်းဘေးနားက လူ ၄၊၅ ယောက်ကိုပဲ ဒီစကားကို အသံကျယ်ကျယ် နဲ့ပြောကြည့်လိုက်... လိမ္မာယဉ်ကျေး လာလိမ့်မယ်။
၅)မင်းရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်က ငါတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကို လာထိခိုက်နေယင်တော့.... သိတယ်နော်... ကမ္ဘာကြီးက ဒီမိုကရေစီ ခုထိရသေးတာမဟုတ်ဘူး နာသွားမယ်...။
အက်စစ်ရေးတဲ.ဆေါင်းပါး က လမ်းပျောက်နေတဲ.လူထုခေါင်းဆေါင် နဲ.သူ.ပါတီကို လမ်းမှန်ပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ.အပြုသဘေါဆေါင်တဲ.ဆေါင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။
ပြူသူတွေရဲ.အသက်/သွေး/အချိန်/ဘ၀ အါးလုံးဆုံးရှုံးခဲ.၇ပေမဲ.ခုချိန်ထိ လမ်းမှန်ပေါ်မရောက်နိုင်ကြသေးပါဘူး။ဒေါ်စုကလွတ်မြောက်လါပြီးတဖက်သတ် ရင်ကြားစေ./ဒုတိယပင်လုံ/အါဂတ မထါးပါဘူး ပြောနေပေမဲ. နအဖ ဘက် က ဒေါ်စုက အရုပ်၁ရုပ်ပါဘဲ။နအဖ အကြောက်ဆုံး လက်နက် ဖြစ်တဲ.လူ.အခွင်.ရေး/ ဆန်ရှင်းတွေ ကို ဒေါ်စုကအလျှော.ပေးခဲ.တါ ဟါအမှား၁ရပ်လို.ထင်ပါတယ်။ဒီပဲရင်းလုပ်ြကံမှု / ၉၀ ရ လဒ် ငြင်းပယ်ခြင်းတွေဟါ နအဖ ရဲ.လူ.အခွင်.အရေးချိုးဖေါက်မှုအဆိုးဝါးဆုံးကိတ်စ ဖြစ်ပေမဲ.လူထုခေါင်းဆေါင်က အါ၈တ မထါးပါဘူးဆိုတေါ.နိုင်ငံတကါတရားရုံးမှာ ရှေ.ဆက်မတိုးနိုင်ခဲ.ပါဘူး ။အစိုးရသစ်နဲ.လဲ တဖက်သက်တွေ.ဆုံနိုင်ပါတယ်လို.ထုတ်ပြောပြီးအေါက်ကျခံစရာမလိုပါဘူး/ အါးလုံးဘူးဆိုပြီးဖရုံမသီးနဲ.တေါ.လေ/အခုလဲ နအဖ ကို ဘူးရမှာဘဲ။ခေါင်းဆေါင်ကေါင်းရဲ.မပြောင်းလဲတဲ.ပြတ်သါးမှုကိုနာခံခြင်တါပါ။တနေ.၁မျိုးမရိုးအေါင်လျှာအရိုးမရှိအေါင်သီအိုရီထဲကမထွက်နိုင်တေါ.အတိုက်အခံခေါင်းဆေါင်ဆိုတဲ.အဓိါယ် ပျောက်ဆုံးနေပါပြီ။ပြူသူတွေတါဝန်ကျေနေပါပြီ။ရေးတဲ။လူတွေဘါလုပ်ပေးခဲ.လဲသိခြင်၇င် အချိန်ေ၇ာက်ရင်သမိုင်းကအဖြေပေးမှာပါ။အယက်အကန်ခံလို.ပြည်သူတွေ အန်ကိုခဲ ကုန်းခံလျှက်ပါဘဲ။သေသေါ်မှတိသြော်ကေါင်းဧ်။
အက်ဆစ် ဆိုတဲ့သူဟာ ဘယ်သူလည်းဆိုတာတော့ သူပြောကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တာက သူဟာ နအဖ အလိုတော်ကြီးဖြစ်မယ် ဒါမှမဟုတ် ပြည်ပနေသူဖြစ်မယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲလုပ်လုပ် အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို ကြည့်၇တယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ဘူး ထင်တယ် မောင်အက်ဆစ်--ဒေါ်စု ဟာအားလုံးကို သဘောပေါက်တယ် နားလည်းတယ် သူတစ်ထဲလုပ်လို့လဲမဖြစ်ဘူး။ဒေါ်စုကိုမထိခိုက်ရင်တော့ ခင်ဗျာ ပြည်သူ့အချဉ်ဖတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုတယ်။
မေးခွန်း၁ခုမေးပါ၇စေ။တကယ်လို.ကံကေါင်းလို.အပြောင်းအလဲ ရခဲ.ပြီး NLDပါတီအါဏါရခဲ.ရ်ျ တိုင်.ပြည်အုပချုပ်ခွင်.ရခဲ.လျှင် ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကျင်.သုံးမည် ။သီု.သေါါ်မည်သည်.စံနစ်ကိုစွဲကိုင် ကျင်.သုံးမည်နည်း။အရှင်းရှင် စံနစ်/ ကွန်မြူနစ်/ ဆိုရှယ်လစ်???ဒေါ်စုကိုမေးကြည်.ဘူးလါးCAPITALISM/ socialism/ communisim?????
Acid is not dr lune swe ,not sPDC groups n not NLD followers.Acid is the name of group who is prodemocracy activist.Acid has right to point out mismanagement of public leader n every one who made mistakes on innocent myanmar people.you all are keep on trying for democracy n freedom but you yourself dont have courage to listern reality, n due to this weak point we could not get any change until now. please try to understand the meaning of democracy that you all had shouted n asked again n again from military ruled SPDC.If Obama made mistaked uS public will blame him.right?this is democracy way.
ကော်မန့်တွေဖတ်ရတာ ရီရတယ်။ ဟား..ဟား..လမ်းထိပ်က ခွေးတွေ အုပ်လိုက်မာန်ဖီပြီး ကိုက်ခဲနေကြသလိုပဲ။ ဟီးးဟီးးးးး
ok ,come on all 400,000 dog soldiers of SPDC fuck lunswe's mother and acid's mother. that dogly infested 400,000 cocks deserve u r mothers.
I think most of people comment here are gentle men. But not seem gentle , that is why we cant achieve what we want. Not wonder because of No unity . So our road is very clear and don't need to argue among each other, you all reap what you sow.
The opnion is opinion and must discuss by openly is better for NEXT STEP.
We known all persons including Dr. Lun also tried very hard for Democracy since 1988 and " ALL MUST DISCUSS for NEXT STEP "
Dr. Lun is really faithfully and all are understanding the present situation.
He reallyt needs to get the good progress of NLD. Thats all.
We can take action if some one are not faithfully since 1988.
Please understand the "WHO IS REALLY ENEMY".
အက်စစ်ရဲ့အာဘော်က တကယ်ကို စဉ်းစားစရာ အချက်ပဲဗျ။ တခြားတစ်ဖက်က အမြင်ကို ကျုပ်တို့အဲသလောက်ထိ သဲသဲလုပ် ဖြစ်စှုရာမလိုပါဘူး။ အမြင်မတူတာ ရှိတတ်တမြဲပါ။ အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေက သေနတ်နဲ့ ၊ ပြည်သူတွေက ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့တိုက်ပွဲ ၀င်တော့ နှစ်တွေသာ ဆွေးသွားဖို့ရှိတယ်။ လက်နက်ကို လက်နက်နဲ့ပြန်တွန်းလှန်မှ မျှတမယ်။ ကျုပ်အမြင်ကတော့ လက်နက်ကို လက်နက်နဲ့ပြန်မတွန်းလှန် နိုင်သရွေ့ တော့ အချင်းချင်း အချင်းများတာနဲ့ညီညွတ်မှု ရနိုင်ဖွယ် မရှိကြောင်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်နဲ့ဝေးနေအုံးမှာ ဖြစ်ကြောင်း။ အမြင်မှားနေတယ် ဆိုရင်လည်း ကျုပ်ရဲ့ညံ့ ဖျင်းမှုသာလျင်ဖြစ်ပါသည်။
good timing. nld just started web n u started cyber-war. but it is so low, so dirty n ugly. if u r so smart acid, show us the better way tomorrow n we all burmese people follow u r way. if u r really smart DASSK also follow u. show us the way bastard. just don't bark.
Hay acid who are you? what is your education? what are you diong? what did you do for Burma? where are you now? what did you do for people?
what don't you go to Burma????????? are you female or gay?
a blogger like lunswe should know which kind of thing should be uploaded. he's got MB.,BS. he should not post sided/prejudiced articles. is DASSK N nld is the only one to blame? Have u ever heard of U Mg Ko the first nld membler killed by MI. DASSK n nld did all their best to reconsile. But all bad things happen because of SPDC. Just keep quiet to point out SPDC side. great grand gentlemen.
မောင်လွဏ်းဆွေ.... တောင်ငူမှာ လူဖြစ်.. ဒုတိယသော နိုင်ငံတော် ကိုယ်တော် ဘုရင့်နောင်သွေး... ပါ..ပါလေရဲ့ဗျာ... ပညာကတော့ သွားဆရာဝန်.... တည်းဖြတ်မှာလား... ထင်တာ တင်မှာလား.. အက်ဆစ် ဘယ်သူ ထင်မြင်အောင်ပြမှ... စကားလုံး အရောင်တောက်မှာလေ.. တာဝန်ကြီးတယ်နော်... စာမကျက်လို့ အမေ ကြိမ်နဲ့ ရိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး မောင်ရေ့... ပြည်သူက မေတ္တာပို့မှာ.... အက်ဆစ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှန်း .. မောင်လွဏ်းဆွေ သိမှာပါ... ဖြန့်ချပေးလိုက်ပါ....
ဘယ်ကလဲ...ဆိုတာ ထုတ်ဖော်ပြဖို့တိုက်ပွဲဆင်ရတော့မယ့်အခြေရောက်နေပြီ။
well-known wise people like dagon taryar, ludu daw amar stay same side with DASSK. who n what is that burger acid?
bark... bark...bark....This guy has no standard to read this all comments.
This isafriendly reminder for Daw Aung San Suu Kyi.
DASSK should read this article.
Many peoples think her policy does not work for Burma.
20 years is not enough?
DASSK should review her policy.
She has many supports. I believe she can help Burma with better policy.
Surf this site. http://komoethee.blogspot.com/2011/02/blog-post_4232.html
Lun Swe should be ashamed of posting such article on his blog.
အက်ဆစ်ဆိုတာလည်း ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘဲဖြစ်ဖို့များပါတယ် ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဆိုတာ မဲဆောက်မှာ လက္ဘရည်ဆုိုင်ထုိုင်ပြီး သူများလုပ်တာကို အပြစ်လိုက်ပြောပြီး ဘလော့မှာ တင်ရေးပြီး နာမည်ယူတတ်တဲ့ လူတယောက်ပါဘဲ အရင်ကလည်း NLD ကုို ပုတ်ခတ်ပြီး သူ့နာမည်ကို လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ယူခဲ့ပြီးပြီ အခုလည်း လူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားလုံးက ပိုပြီး လေးစားလက်ခံလာတာကို မနာလို သ၀န်တိုတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ လူတွေသူ့ကို စိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်လိုက်တာပါဘဲ သေချာတာကတော့ သူကိုယ်တုိုင် တုိုင်းပြည်ထဲမနေရဲလို့ ထွက်ပြေးလာပြီး မဲဆောက်မှာ ခုိုကပ်နေရတယ်ဆိုတာပါဘဲ အဲဒီတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် တုိုင်းပြည်ထဲမှာ ဘာမှမလုပ်ဘဲ အိပ်နေတဲ့ လူတယောက်က စစ်အစိုးရကိုကြောက်လို့ တုိုင်းပြည်က ထွက်ပြေးတဲ့ လူထက်တော့ အစအစအရာအရာ တန်ဖိုးရှိသေးတယ်လိုပြောချင်ပါတယ်
ကိုယ်ကဖြင့် တူတူတန်တန် ဘာမှ မလုပ်ပဲ ခေါင်းဆောင်းကို အပြစ်ရှာတယ်။ ဒါဟာ ဖောက်ပြန်တာပဲ။ ရန်သူကို အလုပ်ကြွေးပြုတာပဲ။
Our Great Leader ,Daw Aung San Su Kyi's latest speech for people like Acid !!! Everyone must listen !!! Long Live Daw Aung San Su Kyi !!!
shan kalay said...
ဘယ်လို လူတွေမှန်းမသိဘူး... အမေစုကိုပဲ အပစ်ပြောနေကြတယ် ...အဲဒီရေးတဲ့သူကော လမ်းပေါ်မှာ ရှေ့ ထွက်ရဲလို့ လား နိုင်ငံရေးအတွက်.. ပါချီပါချ အသိဥာဏ်လေးနဲ့ ... အမေစုလုပ်နေတာ ပြည်သူတွေအတွက်လုပ်နေတာ... သူ့ မိသားစု အတွက် နာမည်အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာမစဉ်းစားမိဘူးလား.. ဘာဖြစ်ဖြစ် အမေစုကိုပဲခေါင်းစဉ်တပ်ပီးတိုက်ခိုက်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်... နိုင်ငံထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြသာနာတွေကိုတောင် သန်းရွှေကိုတင်ပြရင်တောင်ဘာလုပ်ပေးလို့ တုန်း... ဒီလို ဘာမဟုတ်တဲ့ သုံးသပ်ချက်အတွက် ကျွန်တော့်အမြင်က ခွေးလို ဟောင်နေတယ်လို့ ပဲထင်တယ်.... သူကိုယ်သူဘာများမှတ်နေတယ်မသိဘူး.... ခင်များတို့ လေ ဒုက္ခမရောက်ဘူးသေးလို့ ပါ... နောက်မှ နောင်တရရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြိုးဆွဲချပီးသေလိမ့်မယ်... ငါလုပ်တာမှားတယ်ပါလားဆိုတာ သေခါနီးမှသိမဲ့လူတွေပဲ ... ဒါတောင် ခွေးလိုရေးထားတာတောင် ခွေးဆွေခွေးမျိုးတွေ ကလိုက်ဟောင်နေသေးတယ်... ဟုတ်တယ်လေ့ဘာလေးနဲ့ ခင်းများတို့ မို့ မရှက်တယ်... ပြည်သူတွေအသက်ပေးတယ်ဆိုတာမှန်တယ် အမေစု တယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာလဲ သတိထားအုံး ခင်များတို့ ခွေးရွှေတွေဘက်မှာ ခွေးဝဲစားတွေအများကြီးပဲ ခင်များတို့ လို ခွေးမျိုးတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအခုလိုမတိုးတက်နိုင်ပဲရှိနေတာ... သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရယ် ပြည်သူ တွေ အတွက်လုပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ သူတို့ သေခဲ့ရတာကို နောင်တရမယ်လို့ ထင်နေလို့ လား.... ကျွန်တော်သေခဲ့ရင်လဲနောင်တမရဘူး ...ဘာလို့ လဲဆိုတော့သမိုင်းစာမျက်နှာတခုမှာ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့လို့ .... ကျွန်တော့်လိုပဲ ပြောကြမဲ့သူတွေဒုနဲ့ ဒေးပါ... နိုင်ငံရေးနားမလည်ဘူးဆိုပေမဲ့အစစ အရာရာ ယှဉ်ရင် အကုန်လုံး နောက်ကျနေသေးတယ်ဆိုတာလဲ ခင်းများတို့ လို ကျွေးမှစားနေရတဲ့ ခွေးမျိုးတွေကဘယ်သိမလဲ.... နောက်မှထပ်ပြောအုံးမယ်... အမေစုကိုလဲ အလှူလိုက်တယ်လေးဘာလေးနဲ့ အသက်နဲ့ ရင်းပီးပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်သားဟောင်းတွေ အသက်နဲ့ ရင်းပီး ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတွေ အတွက် ဂုဏ်ပြုထိုက်လို ဂုဏ်ပြုတာကိုလဲ အပစ်ကတင်လိုက်သေးတယ်.... ခင်များတို့ လို ခွေးတွေကလေ မပြောကောင်းမဆိုသာ အမေစု အသက်ရှူတာတောင် ဟိုလိုရှူသင့်တယ်ဒီလို ရှူသင့်တယ် လိုက်ပီးပုတ်ခက်နေမဲံအကောင်တွေများ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေက မပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာ... ငြိမ်နေမယ်များမှတ်နေလား....အမြင်ကပ်လို့သူတော်ကောင်းတွေကောင် ခင်များတို့ လို လူတွေကိုတော်တော်အမြင်ကပ်မှာပဲ...မနေနိုင်လို့ သာ ရေးလိုက်တာ... မှတ်ထား ပြည်တွင်းပြည်ပ ကလူငယ်တွေ အကုန်လုံး ခင်ဗျားတို့ လို ခွေးအတွေ နောက်လိုက်ခွေးတွေ ခြံစောင့်ခွေးတွေချည်းပဲလို့ ထင်မနေနဲ့ အုံး.... အားလုံးဟာ တခုခု ဖြစ်လာခဲ့ရင် အတတ်နိုင်ဆုံးအသက်နဲ့ ပေးဆပ်သွားမဲ့ သူတွေဒုနဲ့ ဒေးရှိနေတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားခေါင်းထဲမှာ မြဲမြဲမှတ်ထား.......နောက်နေ့ ထပ်ကိုရေးအုံးမှာ...လုံးဝမကျေနပ်သေးဘူး..........ဝိုင်းဟောင်ပေးတဲ့ ခွေးထီးခွေးမတွေကော လာအုံးမယ်... တွေ့ ရင် ဝါးရင်းတုန်နဲ့ ကို ရိုက်ပစ်မှာ... အရှက်မရှိတဲ့ ခွေးထီးခွေးမတွေ ... အမေထိ ဝါးရင်းတုတ်ကြည့်တဲ့........အမေစု ဟာ ပြည်သူအားလုံးရဲ့အမေပဲ... ခင်းဗျားတို့ လို ခွေးမျိုးတွေရဲ့အမေမဟုတ်တော့ ခင်ဗျားတို့ နာမှာပေါ့....
အကြံပေးချင်ရင် ကိုယ်ပေးမဲ့လူရဲ့ အကြံထက်ကောင်းတာမျိုးပေးရင်အကျိုးရှိ တယ်.... ဝေဖန်ချင်ရင် တူတူတန်တန်အဆင့်ရှိမှ ဝေဖန်လို့ကောင်းပါတယ်.. မဟုတ်ရင်ဟားခံရတတ်တယ်... ဘောလုံးတောင်တူတူတန်တန်မကန်တတ်တဲ့လူက ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကို သွားဝေဖန်လို့ကတော့ဝေဖန်တဲ့လူက စောက်ရှုးပဲ ပေါပေါကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့ကောင်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့... ကိုအဆင့်ကိုယ်သိ ကိုယ့်နေရာကိုယ်နေ...။
ဒေါက်ချာလေဆွ ကစ အားလုံး အာလုံး ဟာ အချိန်ပိုနေတဲ့ ပြည်ပရောက် လေသမားတွေဖြစ်ပါတယ် သူတို့ဟာ ကားဘီးပေါက်သံကြားရင်တောင် သေနတ်သံမှတ်ပြီးကုတင်အောက်ဝင်ပြေးသူတွေပါ
နအဖ ဖားတဲ့သူတွေကတော့ အရိုးအရင်းလေးကိုက်နေရတဲ့ သန်းရွှေခွေးဝဲစား
တွေပေါ့ ကျနော်လား ကျနော်က သန်းရွှေပါ ဆရာကြီးပေါ့
it can be known by how people greet DASSK when she was free that she is leader of the people of burma.lunswe n acid insulted the leader n the people of burma. for the crime u committed both of u are sentenced to death.
saso daw said...
လူပိန်း တွေကတော့ ရလဒ်တခုတည်း ကြည့်ပြီး လက်ခုပ်တီးကြတယ်။ လုပ်ရပ်ကို ထည့်မစဉ်းစားတတ် ဘူး။
"The end justifies all means" ထင်တယ်။
ကံရာဇာငယ် အမျိုးတွေက ဝါးလုံးကို ဖျာလိပ်ပတ်ပီး ထုံးသုတ်ပေး လိုက်တာနဲ့ ဖင်ကုံးဦးချ ချင်ကြတယ်။
Aunty Suu က ဝါးဘုရား တည်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ သဲပုံ စေတီ ဆောက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။
ကျောက်စိုင်ကျာက်သား တွေကို တစ်လွှာတစ်ချပ်ချင်း ထုဆစ် တည်ဆောက်နေတာ။
သူ့လက်ထက် မှာ မပြီးလဲ အရေးမကြီး ဘူး။
ဒီမြေမှာ ခိုင်မာတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အုတ်မြစ်တစ်ခု ချနိုင်ခဲ့ရင် ဦးချရကျိုး နပ်တယ်။
ဆောက်ခွက်ကအရက်သမားမှန်းသိသာတယ် ဘယ်တုန်းကမှ နှိင်ငံရေးနဲ့ မပတ်သတ်ဘဲ ဆောက်ပျင်းကောင် အနေချောင် အစားချောင်လို့မဲဆောက်မှာလာလုပ်စားနေတာ နှိင်ငံရေးစားဖား ဖာခေါင်း
သူမို့ ဆောက်ရှက်မရှိ ရေးတင်သေးတယ် အရက်သမား ဖာခေါင်း
NLD နဲ့ ဒေါ်စုကိုထိလို့ ဝင်ကာတဲ့သူတွေမှာ ဆဲဆိုတာတွေများတော့ ဇိမ်ခမ်းရှေ့မှာစောင့်နေတဲ့သူတွေအတိုင်းဘဲ ဆောင်းပါကြောင့်မကြေနပ်ရင် မှတ်ချက်ရေးတဲ့သူတွေဘဲလူစုပြီး ပြန်ကြရင်တောင်ပြည်တွင်းမှာပွဲဆူလိမ့်မယ်-ဟုတ်ပါတယ်အက်စစ်ဆိုတာအစက်လေးတစက်ပါဘဲ သမိုင်းမရှိခဲ့ပါဘူး နံမည်ကြီးဘို့ရေးနေတာမဟုတ်ဘူး လူတွေကမျက်လုံးစုံမှတ်ပြီး ထိုင်ဦးချနေတဲ့ မှီခိုအကြင့်ဖျောက်ပြီး ကိုယ်တိုင် ပါဝင်နိုင်မယ့် ပြည်တွင်းမှာဆုံရပ်တခုသာ ခေါ်လိုက်ပါ ဒီလိုအချိန်အက်စစ်ဘယ်သူလဲသိပါလိမ့်မယ်။
အက်ဆစ်ကို ပြောချင်တာ တခုပဲရှိတယ်။
ခု..NLD က လူငယ်တွေကို ထပ်တွေ့ အုန်းမယ်။
၇ ရက်၊၈ ရက်နေ့ လား မသိဘူး။
သွားတက်ဖြစ်အောင် တက်ရောက် လိုက်စမ်းပါဗျာ။
ပြည်ထောင်စုနေ့ ပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့ 
ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် နဲ့ အနှစ်သာရ
ဒါမှ အားမရသေးရင် စာဖတ်ဝိုင်းမှာ
ကျုပ်တို့ NLD ကိုတော့ လာမထိနဲ့ ။
Than Htike said...
Ko Lun Swe is RIGHT!
Acid is also CORRECT!
We should think in positive. He wrote the real things happened before and still keep on going.
Hi Acid and Ko Lun Swe,
I do agree your post. Please WAKE them up. If you never remind, they will not know.
All our brothers, please don't be angry with me. Think slowly and you will see the truth.
I've also supported for NLD before. But,now I also very disappointed how to follow with our leader who couldn't make right decision.
ကျုပ်တို့ NLD က လျှောက်လှမ်းနေတာဗျ။
ကျော်သူ က နိုင်ငံရေးထဲကို ၀င်ချင်တယ်။
သူ့ လုပ်ငန်းစစချင်းမှာပဲ "ဒီကောင် တနေ့အမတ်ဖြစ်မယ်" ဆိုပြီး ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတဦးက
ဒါတွေကို ဒေါ်စု မြင်တယ်။
သူ လွတ် လာလာခြင်း ကျော်သူ့ ဆီ သွားတာပဲမလား။
ဒီမှာတင် ကွန်ယက်ဆိုတာကြီး စ အကောင်ထည်
စ ပြီး လူ စုပြီလေ။
တချိန်တည်းမှာပဲ NLD တရားဝင်ဖို့လုပ်ဆောင်တော့တယ်။
တိုက်ပွဲ ၀င်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။
ခု ..ကွန်ယက်ဆိုတာ ပါတီဝင် စုဆောင်းဖို့၊
နအဖ ရဲ့ကြံဖွံ လိုပေါ့ ။
ဒီကြားကာလ ဘာမှလုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး။
နောက် ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ၀င်ကြုံးမလို့ ပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပေးဆပ်ခဲ့တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လည်း တစ်ဖက်က
ပြည်သူ့ တွေရဲ့ ဒုက္ခကို ကြည့်ရင် သူ့ဒုက္ခကလဲ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်က
ပြည်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ဒုက္ခထက် မပိုပါဘူး ။ မိသားစုနဲ့ ဝေးကွာနေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ
သန်းနဲ့ချီရှိပါတယ်။ သူ့ လို မကျော်ကြားလို့လူမသိ သူမသိ အနစ်နာခံစတေး သွားတဲ့ သူတွေလဲ
ပိုက်ဆံမရှိလို့မကောင်းတာ လုပ်စားနေရတဲ့ မိန်းခလေးတွေ ၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံက အမှိုက်ပုံမှာ
ရရာ ရှာစားနေရတဲ့ ခလေးလေးတွေ ။ ဒါဟာ စနစ်ဆိုးတစ်ခုရဲ့အောက်မှာ အကုန်လုံး ခါးစီးခံကြရမှာပဲ။
ဒီတော့ ဒုက္ခရောက်တာတော့ တူတူရောက်ကြတာပါပဲ။
သူဟာ လူထုခေါင်းဆောင် ဆိုတော့ ခေါင်းဆောင်မူ အပိုင်းကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။
NLD ကို ၀ိုင်းအုံမဲပေးခဲ့ကြတယ် ။ အဲဒီရလဒ်ကို အကောင်အထည်မဖေါ်နိုင်ဘူး။
NLD ပါတီဟာ နိုင်ငံရေးပိရိယာယ် မရှိဘူး ။ ရိုးသားလွန်းအားကြီးတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးလှပြီ
ဖြစ်တဲ့ တခြား NLD ခေါင်းဆောင်တွေကလဲ သူ့ အပေါ်ပဲ အားကိုးလွန်းတယ်။
စစ်အာဏာရှင်ဟာ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်နဲ့တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုးအကြံထုတ်နေချိန်မှာ
NLD ပါတီဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မလွှတ်မြောက်ခင်ကလဲ မွေးနေ့ ဆုတွေတောင်းလိုက် စာတမ်းတွေ
ထုတ်လိုက်နဲ့ခု လွှတ်မြောက်လာတော့လဲ ပါတီ ရပ်တည်ဖို့ အတွက် တရားရင်ဆိုင်နေရတုန်း။
ဘယ်လို အားကိုးမလဲ ။
သူမ ခံယူထားတဲ့ နိုင်ငံရေး ခံယူချက်က ဘာမှန်းလဲ ကျွှန်မတေ့ာ မသိပါဘူး ။ စိတ်ဓါတ်တွေ ရိုက်ချိုးခံ
ထားရတဲ့ အနာဂတ်မဲ့နေတဲ့ လူငယ်တွေ တစ်ချို့အခွင့်အရေးရရင် နိုင်ငံခြားထွက်တယ်။
ကိုယ့်ထွက်ပေါက် ကိုယ်ရှာတယ်။ အနာဂတ်မရှိတဲ့ နေရာကနေ ဖေါက်ထွက်တယ်။ အခြေအနေ
မကောင်းရင်တော့ ဘယ်သူမှ ပြန်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ စာတမ်းလေးကိုင်ပြီး သံရုံးရှေ့ 
အကျိုးမရှိတဲ့ အနစ်နာ ခံမူမျိုးပဲ ။
ဒီလိုပဲ NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလဲ စစ်အာဏာရှင်ကို ဖေါက်ထွက်ဖို့အတွက် နည်းပိရိယာယ်တွေ
သုံးသင့်နေပြီ လို့ ထင်ပါတယ်။ သူသာ ဦးဆောင်ရင် နောက်က လိုက်ပါမဲ့ လူထုကြီးက အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။
လိုက်စည်းရုံနေဖို့မလိုပါဘူး ။ အမြဲထောက်ခံပြီးသားပါပဲ။ ခုဟာက မျှော်လင့်ချက် မဲ့ရလောက်အောင်
လောက်လောက်လားလား လုပ်ပြနေတာဘာမှ မတွေ့ ရလို့ ပါ ။
ဈေးရောင်းတာ ကျောင်းဖွင့်တာ ဆေးခန်းသွားတာ ။ လူမူရေးအသင်းတွေ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ စစ်ပွဲဝင်နေတဲ့
တိုင်းရင်းသားတွေ နဲ့ အမြန်ပူးပေါင်းပြီး တော်လှန်ရေး လုပ်သင့်ပါတယ်။
ကျွှန်မတို့လိုနေတာ စည်းလုံး ညီညွှတ်မူပါ။
ကျွှန်မတို့ရန်သူဟာ စစ်အာဏာရှင်ပါ ။
စစ်အာဏာရှင် ဖြုတ်ချဖို့အကြမ်းမဖက်တဲ့ နည်းလမ်းဟာ အသုံးမ၀င်ပါဘူး ။
အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ နှစ် ၂၀ ကျော်က သက်သေပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဘာလို့ အခုလိုအောက်ကျ နောက်ကျ ဖြစ်နေရတာလဲ
မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေ အများစု (အကုန်လုံးနီးပါး) က အနုတ်စုတ် ဂုတ်စုတ် အောက်တန်းကျ နောက်တန်းကျ ဖြစ်နေကြလို့ပါ။
ဝေးဝေး မကြည့်ပါနဲ့ (ကျွန်ုပ်ကလွဲလို့ သူများတွေရေးထားတဲ့) ကွန်မင့်တွေကို ပဲကြည့်လိုက်ပါ
သဒ္ဒါ အမှား၊ စာလုံးပေါင်းအမှား၊ သတ်ပုံ အမှား၊ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာတွေ ကပိုဆိုး၊ အကြောင်းအရာကလည်း သုံးစားလို့မရ၊ ရိုင်းစိုင်းလိုက်တာလည်း မျိုးရိုးဇာတိကို ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်းဖေါ်ပြနေသလို ပါဘဲ။
မြန်မာလိုရေးရင်လဲ ဘိုလိုနည်းနည်းညှပ်ရမှ၊ မြန်မာလိုလည်းမတတ် အင်္ဂလိပ်လိုလည်းမတတ်၊ တခြား ဘာအတတ်ပညာ မှလည်း ကောင်းကောင်းမတတ်။
စစ်သားကစစ်မတိုက်တတ် (ကျန်တာတော့ အကုန်တတ်၊ ဘုန်းကြီးစာချရမလား၊ ဆရာဝန်ကို ကုသရေးလမ်းညွန်ရမလား) ဆရာဝန်ကဆေးမကုတတ် (ကျန်တာတော့ အကုန်တတ် အယ်ဒီတာလုပ်ရမလား၊ သီချင်းဆိုရမလား)
မြန်မာဘောလုံးငွေခေတ်က အင်တာဗျူးတခုမှာ သန်းတိုးအောင်ကြီး ပြောခဲ့ဖူးတာ သွားသတိရတယ်၊ “မြန်မာ့ ဘောလုံးတကယ်တိုးတက်ဖို့ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မျိုးလှိုင်ဝင်းတို့က အရန်လောက်ဖြစ်နေရမယ်”
(လက်ရွေးစင် အစစ်တွေက သူတို့ထက် အများကြီးပိုကောင်းနေရမယ် လို့ဆိုလိုသည်။)
သို့သော်လည်း ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ သူတို့ထက်သာတာ မပြောနဲ့ သူတို့ ခြေဖျား တောင် မီတဲ့သူက ခပ်ရှားရှား။
အဲဒီသဘောမျိုးပါဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိပါတယ်။ အမှားတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗဟိုကော်မတီဝင်ဖြစ်ဖို့ မနည်းကြိုးစားနေရတယ်ဆို ကောင်းတာပေါ့။
(တခြား ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ က သူ့ထက် အများကြီး ပိုတော်နေ လျှင် ဟုဆိုလိုသည်။)
သို့သော် ခက်နေတာက သူ့ခြေဖျား မီတဲ့သူက ဒီခေတ်မှာ မရှိတာခက်တယ်။ အထူးသဖြင့် လူထုကို စည်းရုံးနိုင်တဲ့ နေရာ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာ သြဇာ တိက္ကမ ရှိတဲ့နေရာ မှာပေါ့။
လွှတ်တော်တက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရော၊ အခြား ပြည်တွင်း ပြည်ပက အော်ကျယ်အော်ကျယ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာရော မြန်မာလို ဝါကျတစ်ကြောင်းကို ပြေပြေပြစ်ပြစ် ဖြစ်အောင် ပြောတတ်တဲ့သူ ရှားတယ် အင်္ဂလိပ်လို ဆိုရင်တော့ ပြောမနေနဲ့တော့ စုတ်ပြတ်သတ်နေတာ။
အတတ်ပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ဆင်ခြင်ဥာဏ်ဆိုတာ ကလည်းနတ္ထိ။
စစ်ဗိုလ်တွေ မတတ်တာ၊ မတော်တာ က အကြောင်းမဟုတ်ဘူး သူတို့က စစ်သားပဲ ဘယ်တတ်ပါ့မလဲ။ ပြည်သူတွေကပါ သူတို့ လို လိုက်ညံ့နေကြတာက ခက်တာ။
အရည်အချင်း မရှိဘူးဆိုတော့ အကျင့်စာရိတ္တက ကော?
မိတ်ဆွေတို့ ရေ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသာ ပြန်ကြည့်လိုက်ကြပါတော့။
(ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်ခိုင်းရင်တော့ ဘာမှမြင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။)
တတိယနိုင်ငံရောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ ကြည့်လိုက်၊ ဒုက္ခသည် ဘဝ က တိုးတက်လာတယ် ဆိုတာ ရှားတယ်၊ တတိယတန်းစား ဘဝ မှာပဲ ကျင်လည်နေကြတာများတယ်။ (ဘာလို့လဲ? စတုတ္ထတန်းစာ မရှိလို့။)
မြန်မာတွေ ကိုယ်နဲ့ တန်ရာတန်ရာ ရကြတာပါ။ အိုကေ ပြောချင်တာက တော့ ဒါပါဘဲ။ ကျွန်ုပ်ကို စာလုံးပေါင်းအမှားတွေ ထော့ကျိုးထော့ကျိုး အင်္ဂလိပ်စာ တွေနဲ့ စတင်ပြီး ဆဲနိုင်ပါပြီ ရွှေမြန်မာအပေါင်းတို့။
mingalarpar william thargi
the way u write ur satire is ok.do not see ur own people through coloured glass. pls try to understand them. they are product of nay win and than shwe. including myself.so they have poor education.some have loose character.pls also see cause, not only effect.people n government are like container n water in it.if container is round the water in it is round-shaped. so does if squared.ever since 1962 all ne win n than shwe did is systematic n gradual degrading of own people.
attn: william thargi.
so that's it.i don't think highly upon sinaporean who are very good at english.they just walk on the good walkway done by their patriotic leaders.if we the people of burma have the same daily life asasingaporean, we can not be below them.
thanks for u r attention william.
Pa Pa (RASU) said...
I would like to request to ALL, Dr. Lun Swe, Acid and ALL must be understand this time.
Now, Burma is under JUNTA's creation of 2010 election and USDA and SPDC/BSPP/Na Ah Pha's
magic Government program at present.
So, those Activists will suffer very pain and need to push to NLD.
We can try and must open contact through Internet for the better suggestion and plan for future.
We trust ALL and paid the time, young lives and so many things from each persons.
The majority is ALL are not from Military Guys or supporters and we can kill if some one are no faithfully. Because this is Politic and Not Game.
So, DASSK and NLD must be leads the Democracy and all Forces. SPDC also afraid their
some persons are complaing about the lossing of their seat and power at the moment among the military regime.
We were trying LONG HISTORY and long time because of URGLY/BAD/KILLER or with out diginity Government generation from military since 1962 to 2011.
The TIME is very closed and must fight back with our groups inside and out side of Burma by each channel.
Thanks to ALL from any where and what ever you have done for Burma.
We are Still Figting since -
1. 1970 University Golden Jubilee at RASU.
2. 1974- U Thant Funneral raid at Air Port (Not Successful) and then formed the committee at AE 10,10 pm at RASU. Then Next day brought the U THant to Convocation and some University Sa Ya Gyi were tried to request infront of Covocation Hall but we occupied and hold the funeral assembly and hand over to committee.
3.KoTin Mg Oo arrested at Bata and Ma Hla Myaing requestd to Insein Jail and march with RIT students.
4.Ga Gyi/4466 Land Rover Car and carried the killed labour to RIT compound and showed to Public.
5.In 1988, our group joined at RIT activists at Gyo gone BPI road and fired the co-operated shop on 13/03/1988.
6.Fight and fired th MAZDA four wheel infront of co-operative shop on Anawyahtar Road on 26/03/1988.
7.Then fight back all location asaPublic.
8.In 1988, we worked for DASSK. But all were sincere and still trying and some are not qualified for the any status. This is UNIVESAL TRUTH.
9.In 2005, some are misunderstanding NLD, but we must protect NLD as sincere and must stand clean position. But they allowed and staying silence not well known position.
10. In 2007, NLD CRPP some member and NLD youth were joined for Demonstartion and support
to all 2007 Student Union and All Groups until Na Gai was killed but we remind to his traslator(one of Burmese/Arakan lady) must run away.
So, do not misunderstand to each group and Dr. Lun also should be involved in all history along the struggling time from his channel or university.
Now, 2010 SPDC election and New Government is cheating the votes and not sincered government. So, All must against them and NLD must also leads again and all must hand to hand clip position is better for Burma and I would like to request to ALL LEADERS and Public.
We are not leader and we are PUBLIC. Dr. Lun pointed out the - NLD must show the positive decision and strike is really essential at present.
၉တန်းကျောင်းသားဘ၀ ဆရာမ ဒေါ်စန်းတင် စကားကို သတိရမိပါတယ်။။
ခင်ဇော် ထင်ပေါ်ရုံဆိုရင် ဖင်ဖော်ဲပြီးသွားလိုက်ပါ ။။ တကျောင်းလုံးက မင်းကို တသက်လုံးမှတ်မိသွားလိမ့်မယ်။
ဒီဆိုဒ်ထဲမှာတင်ခွေးဝဲစားတွေ တော်တော်များများရှိနေတာတွေ့ ရတယ်... ဒီပိုစ့်မှာ အမေစုကို အကြံပေးသလိုလို နဲ့ နအဖ ဘက်ကနေပီး ပြောထားတာတွေမြင်နေရတယ်... အခုလို ဝေဖန်သုံးသပ်တာကို ဘယ်သူကဘယ်လိုအဆင့်မှတင်သင့်တယ် ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ မတင်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်မရှိဘူး... အဲဒီ ခွေးလို အောက်တန်းကျတဲ့လူတွေရေးတာ အဆင်မပြေလို့ပြည်သူတယောက်အနေ နဲ့ တင်တာ ... ဒူးနေရာဒူးတော်နေရာတော် လုပ်ခိုင်းတဲ့လူတွေက အဲဒီပြောတဲ့ခွေးဝဲစားတွေလို အရိုးကိုက်တဲ့လူတွေလိုများမှတ်နေလို့ လား... လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ ကော ကျွန်တော်ပြောတယ်... ပြောသင့်ပြောထိုက်လို့ ပြောတာ ပြောရဲတဲ့သတ္တိရှိအောင်လဲကျိုးစားနေတယ် ... ခင်းဗျားတို့ လိုတော့ လက်ရေးလှပြနေရတဲ့ လက်အောက်ခွေးတွေလိုမဟုတ်တာတော့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ...ထပ်တင်ထပ်ရေးအုံးမှာ.... ကိုယ်ကျိူးကြည့်တဲ့အစိုးရကိုများ ဖားလားယားလားနဲ့ ဖားတဲ့ခွေးတွေကလဲ တော်တော်အမြင်ကပ်ဖို့ ကောင်းနေပီ....
တခိူ့ နေရာတွေကတော်တော်လေးကိုမှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကခေါင်းဆောင်ကေင်းတယောက်ပါဘာဘဲ
ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ နအဖကိုတော်လန်နေတဲ့ သူတွေအတွက်ဆင်ချင်နိင်တာပေါ့
အမေစုကိုထိလျှင် ၀ါးရင်းတုတ်ကြည့်ဆိုတဲ့ Shan Kalay ...ဒေါ်စုကိုတကယ်နေထိတာ နအဖလား အက်ဆစ်လား ရိုက်လိုက်လေ
ဒီလိုမျိုး ပြောရဲ ဆိုရဲ ရမယ်။
နအဖ ကို ဝေဖန်နေတဲ့ဆောင်းပါးတွေက ရိုးနေပြီ။
အနာကောင်း သွားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
သူများမျက်ချေးကို ကိုယ့်မျက်ချေးထက် ပိုမြင်တတ်တာ လူ့သဘာဝပါ။
နှစ်ဖက် အမြင်ရှိတဲ့ ။ အကောင်း အဆိုးကို ကြံဖန်ရှာကြံ ဝေဖန်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ ကိုလွဏ်းဆွေ။ Acid.
မှန်တယ်ထင်ရင် အမုန်းခံရဲတဲ့ အတွက်လေးစားတယ်။ ဖောက်ထွက်ဆန်းသစ် တဲ့ မတူညီတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အမြင်တွေ ရဲရဲကြီး ချပြရဲ့တာကြိုက် တယ်တယ်။
Aunty Suu အကြောင်း ပြီးရင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ အကြောင်း အများမစဉ်းစား မိတဲ့ ဘက်က အမြင်လေး လုပ်ပါအုံး ဗျ။
"တာဝန်ယူရဲသော၊ တာဝန်ယူစ်ိတ်ရှိသော၊ တာဝန်ကျေသောဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ၊ နဲ့ 2010 ပြည့်နှစ် အနိုင်ရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဒီပို.စ်ရေးထားတာသည် ကိုယ့်တိုင်းပြည်အပေါ် ကောင်းစေချင်လို. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ. အနိုင်ရပါတီတွေ ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်စေချင်လို. မခံမရပ်နိုင်ရေးသားထားတာလို. နားလည်မိပါသည်...သို.သော် မြန်မာပြည် နဲ. တခြား နိုင်ငံတွေ မတူညီတဲ့ အချက်တွေ ရှိသလို အာဏာ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ အုပ်စုလဲ မတူညီကြပါဘူး...ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်သွားနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အကြမ်းမဖက်နည်းကလည်း တခြားသူတွေ နဲ မတူပါဘူး...ကျမလဲ အဲံဒီ အကြမ်းမဖက်နည်းကို ပဲ သဘောကျပါတယ်...ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာမှ လုပ်မပေးခဲ့ဘူးလို. ခု စွပ်စွဲထားတယ်ဆိုတော့ ကျမ တခု မေးချင်ပ်ါတယ်.. သူမကို ကြီးကြီးမားမား အပြောင်းအလဲကြီး ဖြစ်အောင် လုပ်ပြနိုင်အောင် ဘာအခွင့်အရေးများ ပေးဖူးသလဲ ... တခုခု လုပ်တာနဲ. အကျယ်ချုပ်ချခံနေရတဲ့ သူအဖို. ဘယ်လိုများ ကြီးကြီးမားမား တတ်နိုင်မှာလဲ...ခုလဲ ကြည့်လေ နိုင်ငံရေးလုပ်တာတောင် မဟုတ်ဘူး...လူမှု.ရေးလိုက်လုပ်တာတောင် သူမ ပါဝင်လိုက်တာနဲ.ပိတ်ပင်တားဆီးမှု.တွေ ဖြစ်လာတယ်မလား...ဒီတော့ တတ်နိုင်သမျှ စွမ်းအားနဲ. လှုပ်ရှားနေတဲ့ သူမကို အပစ်တင်မှာလား...အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ မနာလို စိတ်တွေနဲ.အောက်တန်းကျစွာ ပိတ်ပင်နေတဲ့ သူတွေကို အပစ်တင်မှာလား ..သေချာစဉ်းစားပါ
ဘယ်အရာမဆို တဦးအားဖြင့် မစွမ်းသာ ၊ စုပေါင်းအားဖြင့်သာ အောင်နိုင်၏ တဲ့ ...ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဘာမှ မလုပ် ပဲ နဲ. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တယောက်တည်းကို မျှော်ကိုးမနေသင့်ပါဘူး.... တဦးတယောက်မှ သည် တနိုင်ငံလုံး ပါဝင်လာမယ်ဆိုရင် မနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ...ပြည်သူတွေ အသက်အသေခံခဲ့တယ် တာဝန်ကျေခဲ့ပြီ လို. ရှင်ပြောတယ်..ဒါဟာ အပုံသေးသေးလေးပါ...ကျမ အပါအဝင် ကြောက်လို. လူကိုယ်တိုင်မပါဝင်ရဲသူတွေ ကျန်နေပါသေးတယ်...ဒီတိုက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လဲ အတူ နွှဲခဲ့တာပဲလေ.သူ ပုန်းနေလို.လား...ကံကောင်းလို. မသေခဲ့တာမလား...ရွေးကောက်ပွဲလည်း ပြီးသွားခဲ့ပြီ...ခုမှ ကန်.ကွက်လို.လည်းမရတော့ဘူး.. ဒီလိုဖြစ်အောင်လည်း ဟိုက အကွက်ချ စီမံခဲ့တာ..ဒီတော့ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးဘာလုပ်နိုင်မလဲ ဘယ်နည်းနဲ. သွားနိုင်မလဲ ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မစဉ်းစားမိပဲ နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး....ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြစ်တင်မနေပဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပါဝင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လက်တွေ.ပြလိုက်ပါ..
u rasmart guy. very good comment. bravo!
စာရေးသူဘက်ကတကယ့်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သာဆိုရင်တောင်းဆိုဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်သင့်တယ်..သူတပါးကိုအပြစ်မတင်သင့်ဘူး..ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်ကသင့်လို၊သင့်ကိုမြှောက်ပေးတဲ့လူတွေလို၊ ချီးဦးနှောက်နဲ့မဟုတ်ပါခင်ဗျာ...ကိုယ့်ဦနှောက်ထဲချီးဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုအရင်စမ်းစစ်ကြည်သင့်ပါတယ်။ သင်သိသင့်တယ်။ပြည်သူတွေဟာလည်းအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားတတ်တဲ့အသိညဏ်ရှိတဲ့ဦးနှောက်နှင့်လူများသာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့လိုချီးဦးနှောက်နှင့်လူများမဟုတ်ကြပါ။။
အက်ဆစ်ရဲ့ ပထမဆောင်းပါး အရေးအသားဟန်၊
ဒါတွေက ရဲဘော်ကျော်သန်း ဆောင်းပါးရေးဟန်နဲ့
အက်ဆစ် က ရဲဘော်ကျော်သန်း ဖြစ်ဖို့ များတယ်။
အက်ဆစ်ရဲ့ ဒုတိယဆောင်းပါး က ရဲဘော်ကျော်သန်း
နဲ့ ကိုလွဏ်းဆွေ ပေါင်းပြီး NLD ကို
သူတို့ ဖြစ်စေချင်တာတွေ ပေါင်းရေးလိုက်တယ်
အပြန်အလှန် အချီအချလေးတွေနဲ့ ......။
(၈၈ က စခဲ့တဲ့ ကျုပ်တို့တော်လှန်ရေးမှာ ဘုရားကားအောက် မျောက်ကားအထက် ဆိုသလို ဗျိူရိုကရက်ဉာဉ်နဲ့ လူတွေက ခေါင်းဆောင်နေရာ အဆုံးအဖြတ်နေရာတွေမှာ အုပ်စီး ထားလိုက်တာ တမိုးလုံး ဖျောက်ဆိပ်သူတို့ ချည်းပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ၈၈ နိုင်ငံရေး ဒီရေကြီးလည်း နှစ် (၂၀) ကျော် ကာလအတွင်းမှာ ရေစုန်မျောသွားခဲ့ရတယ်)
(အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ အ ထက်ဖား အောက်ဖိ ဝတ်ကျေတန်းကျေ အကျင့်စွဲနေတဲ့ မဆလတွေဆိုပဲ)
(ဒီလိုနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီဟာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာလိုက်၊ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတချို့ဖော်ပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးဖြစ်လိုက်၊ ဒေါ်စု ပြန်အဖမ်းခံရပြီး ငြိမ်သွားလိုက်နဲ့ ကြေငြာချက်တွေထုတ်တဲ့ စာကူးစက်တလုံး ဖြစ်သွားတော့တယ်)
(ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးလို နိုင်ငံရေးသက်သက်နဲ့ မရနိုင်လို့ စစ်ရေးနည်း လက်နက် ကိုင်ဖို့ ထွက်လာခဲ့ကြတာကို မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အန်ဂျီအိုအကြိုက် အကြမ်းမဖက်နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ ဖော် နည်းကားကြီးကို သုံးပြီး ရေသာခိုကြတယ်)
(ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ဆို လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ တိုက်တွန်းမိတဲ့သူကို အန်ဂျီအို မ ကြိုက်လို့ မလုပ်နိုင်ဘူး ဗြောင်ငြင်းလွှတ်လိုက်သတဲ့။ အန်ဂျီအို ခိုင်းတာ အကုန်လုပ်၊ အန်ဂျီအို မကြိုက်တာ အ ကုန်ဖြုတ်)
၉.၁၀.၂၀၁၀ တွင် ရဲဘော်ကျော်သန်း၏စာစု
(ပြည်တွင်းအယ်ဒီတာတဦးရဲ့ စကားအတိုင်းဆိုရင် နှစ်ဘက်မိဘတွေကည်း သဘောမတူ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း နှာခေါင်းရှုံ့နေကြတဲ့ လိင်တူချစ်သူများရဲ့ မင်္ဂလာပွဲတခုပေါ့)
၁၄.၁၀.၂၀၁၀ တွင် ကိုလွဏ်းဆွေ၏စာစု
(နေ့ခင်းကြောင်တောင် လူလယ်ခေါင်မှာ လိင်တူဆက်ဆံပြရတော့မယောင် ပေးစားရင်း အချိန်ကုန် ကြမယ့်သူတွေလည်း အခုလို သေရေးရှင်ရေးကာလအထိ ရှိနေဦးမှာပါ)
ကို ဖိုးဥာဏ် said...
ဟောဗျာ..ခုကိစ္စက ရှင်းရှင်းလေးကို ဘာမှ နိုင်ငံရေးနဲ့မပါတ်သက်ပါဘူး။ ဒေါ်စုကလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့ ပြည်ပအကူအညီတွေက ဒေါ်စုဆီရောက်ကုန်တယ် ဒေါ်စုကနေတဆင့်ကူညီကြမယ်ဆိုတော့ ခြံစည်းရိုးဘေးက အချောင်သမားတွေ ဘာမှမရတော့ ထအော်ကြတာပါ။ အနှီ ဒေါက်တာကြီးအပါအ၀င် ပေါ့
Acid has already done the good job by posting his/her thoughts.
Attacking Acid & Dr Lun will not help anything especially using bad words.
Discuss case by case whether you agree (or) disagree (or) what you think may help to findasolution. Because, we all hate dictator Than Shwe, we all want Democracy.
I agree the points that Acid mentioned.
I think the non-confrontation method will never drive away the dictator Than Shwe. That is why, the soft approach already wasted 20 years. NLD/DASSK must do some changes.
The world is changing. We must change.
ကိုဖိုးဥာဏ် ခင်ဗျားပြောတာ တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘုံရန်သူကို မတိုက် တော့ဘဲ ဘာကြောင့် ဒီဘက်ကို လှည့်တိုက်လဲဆိုတဲ့ အဖြေကိုရခဲ့တယ်။
OUR PUBLIC OF BURMA,
WE MUST CO-OPERATE AND MUST CONSIDER THE UN-SUCESSFUL OF DEMOCRACY GOAL.
1. The SPDCis withou shame and doing to rule by force or so many ways.
2. No CLASS or Standard of Government after 1988. U Ne Win admtted the REAL condition of Burma in 1988.
3. So, we must pay attention to GOAL and enough for REMINDER to NLD and around the WORLD group or strength.
4. Now, Shan,Kachin, Kayein, Mon, Arakan and some of our relative of citizen Wa, Kokant and etc are agreed to FIGHT BACK the COMMON Enemy.
5. So, we must fight back by the all channel together with NLD and All of Leaders from every where.
6. Their NEW GOVERNMENT Could be kickout by PUBLIC forces and ARM GROUP are NLD forces.
7. Their Paliament should be next March and will declare to cancel the NLD is 100 % and will arrest again all CRPP memebers and activists again.
So, we must STOP all complaint to each of our brothers and must think as brother/sister/family
With Respect and Request to All Leaders,
The writer is out of his depth.What is his real massage to readers? He still has to learnalot to get en-bed with political field.I hope he is notatrishaw driver.
ကျွန်တော် အက်ဆစ်ရဲ့ပိုစ့်ကိုဖတ်ပီးတော့ ပထမတော့ ဒေါသထွက်မိတယ် နောက်ပီး ဒေါသရဲ့အရှိန်နဲ့ ကွန်မန့် ရေးတယ်၊ နောက်ပိုင်း အက်ဆစ်ရဲ့ပိုစ့်ကို စိတ်မဝင်စားတော့ပဲ ကွန်မန့် ပေးထားတဲ့စာတွေကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ် ဒီကွန်မန့် တွေထဲမှာ လူတန်းစားပေါင်းစုံ အလွှာပေါင်းစုံ ပညာတတ်၊အောက်ခြေလူတန်းစား၊စစ်သား၊အရပ်သား၊သူလျှို၊နိုင်ငံေ၇းသမား အသီးသီးပါဝင်နေတာတွေ့ ရတယ် အရက်သမား အပါအဝင်ပေါ့ ........ဗဟုသုတရှိတဲ့သူတွေကလဲ သူတို့ သိသလောက်ပြန်မျှဝေပေးကြတယ် ပညာမတတ်တဲ့သူတွေကလဲ ပြောချင်ရာစွတ်ပြောကြတယ် စစ်ဘက်က သူလျှိုတွေကလဲ ဝိုင်းတိုက်ခိုက်ကြတယ် ... ထားလိုက်ပါ ဒါတွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့... အခု ကျွန်တော်တို့ အိမ်တအိမ် မိသားစုတစု မိဘ နဲ့သားသမီးတွေ ရှိတယ်။ ဒီမိဘနဲ့ ဒီသားသမီးတွေ တပုံစံတည်း ထပ်ထူဖြစ်မနေကြပါဘူး ဆိုးတဲ့သားသမီး လိမ္မာတဲ့သားသမီး ပြောမရဆိုမရသားသမီး အရွဲ့ တိုက်တဲ့သားသမီးတွေနဲ့ ပေါ့ ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီမိသားစုတွေ စည်းလုံးဖို့ ဒီသားသမီးတွေပဲ စည်းစည်းလုံးလုံးရှိမှရမှာ ၊ ဒီမိသာစုကောင်းစားဖို့ ဒီသားသမီးတွေပဲတိုးတတ်အောင်လုပ်ကြတော့မှာ မိဘအားကိုးလို့ မရတော့ဘူး၊ မိဘက ကောင်းတာမကောင်းတာအပထားလိုက်ဗျာ...၊ မိဘက ဆိုးမွေကောင်းမွေကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်ပီ ... ဒါပေမဲ့ အဲဒီသားသမီးတွေက မိဘကိုအပစ်မတင်ပဲ အားလုံး စည်းလုံးပြီး ဆိုးမွေတွေကို ကောင်းအောင်လုပ်ပီး ကောင်းမွေတွေကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူ သဘောမျိုးပေါ့....။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလဲ ဒီအထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာလဲ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပါပဲ...၊ အားလုံးနီးပါဟာ မိသားစုအရေးကိုလုံးပန်းနေကြရတာပါပဲ...၊ သူတို့ တွေရဲ့မိသားစု နိုင်ငံကောင်းစားဖို့ အားလုံးကလိုချင်ကြမှာပါပဲ..၊ စစ်သားတွေဆိုတာကလဲ ပြည်သူကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာပါ... သူတို့ စိတ်ထဲမမြဲပါဘူး...ကျောက်ဆိုင်ကျောက်တုံးဟာလဲ... တိုက်ပါများရင်ရွေ့ တာပါပဲ.... ဒီအထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကလဲ စစ်သားဆိုလဲ သူမိသားစု စားဝတ်နေရေးပြေလည်ဖို့ ကြိုးစားနေရတာပဲ ဖားနေရတာ အောက်ကျို့ နေရတာပဲ... သူလျိုတွေလဲဒီလိုပဲ... ဒီလိုတွေပြောပီးတော့ သူတို့ တွေ သက်ပျင်းတချက်တော့ချမိမှာပါပဲ... ဒီအထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကို အဲဒီမိသားစုထဲက ညီအကိုမောင်နှမတွေလို သဘောထားကြပီးတော့ တော်တဲ့သူ ကောင်းတဲ့သူတွေကလဲ ညံ့တဲ့သူဆိုးတဲ့သူတွေပြောတာကိုဗွေမယူပဲ ဆိုးတဲ့သူတွေကလဲ အကိုတွေ ညီတွေညီမတွေ ကိုယ့်ကို စေတနာနဲ့ ပြောနေတယ်လို့ သဘောထားပီး အားလုံးစုပေါင်းတိုင်ပင်ပီး မိသားစုရေရှည်ကောင်းစားအောင် မြန်မာပြည်ရေရှည်ကောင်းစားအောင် မျက်စိတမှိတ်မဟုတ်ပဲ မျက်စိတဆုံးအတွက် ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာမဟုတ်ပဲ ဒီ comments box လေးထဲမှာတင်စပြီးစည်းလုံးမှု ရယူရအောင်လားခင်ဗျား... အပြင်အကြောင်းကိုလောလောဆယ်မစဉ်းစားပဲ အရင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး စပီးစည်းလုံးမှုယူရအောင်..... တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ နိုင်ငံအတွက် အုတ်တချက်သဲတပွင့် မထမ်းရွက်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပီး နားလည်းမှုကို ဒီ ကွန်မန့် ဘောက်စ့်လေးကနေပဲစပီး ယူကြရအောင်ဗျာ... အားလုံးသိသလောက်တတ်သလောက်ကို တဦးနဲ့ တဦး ညှိနိုင်းပီးတော့ မိသားစုစိတ်ဓါတ်နဲ့ ဆွေးနွေးကြရအောင်ဗျာ... အားလုံးဟာ အသွင်မတူ ဆန့် ကျင်ဘက်တွေ စုဝေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ အရေးကြီးရင် ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုမောင်နှမတွေပဲ သွေးနီးကြရမှာ... အမေစုကို အရင်မပြောပဲ ဒီအထဲမှာရှိတဲ့အကိုကြီး အမကြီး ညီလေး ညီမလေးတွေ အသွင် ဗွေမယူပဲ ဝေဖန်တိုင်ပင်ကြပါလို့ ကျွန်တော် ရှမ်းကလေး မှ အနှုးအညွှန့်မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျား........။
ကွန်မန်.တွေလဲ ထပ်နေပါပီ..ဆဲဆိုတာတွေလည်း ကမ်းကုန်နေကြပါပီ...တကယ်တမ်းတော့ ဘာအာဏာ ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှ မရှိတဲ့ ပါတီနဲ. လူတွေကို အပြစ်တင်နေတာဟာ ရှက်စရာတခုပါ... အမှန်တော့ ဘယ့်သူကို အပြစ်တင်ရမယ်ဆိုတာ ရေးတဲ့သူသိပါတယ်.. .လုပ်ပ်ိုင်ခွင့်အာဏာမရှိသလို လုပ်သမျှ အပိတ်ခံနေရတဲ့လူကိုလား..အာဏာဆွဲကိုင်ပြီး အမျိုးကောင်းစားရေး လုပ်နေသူတွေကိုလား ဆိုတာ...သို.သော် ကြောက်သွေးပါလို. ရမ်းလိုက်ရခြင်းလို. မြင်မိပါတယ်.....ဆဲဆိုခြင်းသည် မိမိ မိဘ၊ မိမိ ရပ်တည်အားပေးသော အဖွဲ.အစည်း နှင့် မိမိ ကိုယ်တိုင်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းစေပါသည်..
I wanted to know if you was her, what will you do? And what will your plan be?
Please, openly talk. If you was her. What will your steps be?
Will you order rockets and fire to Myanmar Army? Will you bring the tanks and fire them?
Please, let me know. I am glad to hear from you Acid.
တို့တိုင်းပြည် တို့ပြည်သူတွေ အတွက် စေတနာနဲ့ ပါဝင်ပြောဆို ဆွေးနွေးကြသူ အားလုံးကို လေးစားပါတယ်။
ကျွန်နော်တို့တတွေ ထင်ရာ မြင်ရာ အော် ဟိုလူ့လက်ညိုးထိုး ဒီလူ့အပြစ် နေတာတွေရပ်ဖို့တန်ပါပြီဗျာ၊
ကျွန်နော်တို့တတွေ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့နေရာ က အကောင်းဆုံး လုပ်ရင်း အပြောင်းအလဲကောင်း တစ်ခုပြုနိုင်မဲ့ အချိန်ကိုစောင့်ရင်း အားလုံးအသင့်ဖြစ် အောင် ပြင်ထားကြရအောင်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြည်သူတွေကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးနေတာ ဖြစ်တယ်။ ခုနေများ အမေစုက ကဲ ... လာကြဟေ့ ဒင်းတို့ ကို လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြကြမယ် ဆိုပြီး ကြေုငြာလိုက်လို့ ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးက လူတွေ လမ်းပေါ်ရောက်နေကြမှာ ဧကန်မလွဲပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပစ်ဆိုတာနဲ့ပစ်တတ်တဲ့ ချီးစားစစ်တပ်ဟာ သံဂါ (စာလုံးပေါင်းသည်းခံပါ) တွေကိုတောင်အလွတ် မပေးတာ၊ ပြည်သူတွေကို လူလို့ တောင် သတ်မှတ်ထားတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် သေချင်းသေ ပြည်သူတွေသာ သေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးထွက်သံယို မဖြစ်စေချင်တဲ့ အတွက် အမေစုဟာ အကြမ်းဖက်ရေးကို အားမပေးတာပါ။ ခွေးရူးတွေနဲ့ ဖက်ကိုက်ဖို့မတန်ပါဘူး။ သတ္တိရှိရင် အက်ဆစ် ကိုယ်တိုင် ဗမာပြည်ပြန်ပြီး သန်းရွှေအိမ်ရှေ့ သွားဆဲ ဆန္ဒပြစေချင်ပါတယ်။
ကျနော်က တော့ပြည်တွင်းမှာအမှန်တကယ် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကို အမြဲအားကျလေးစားသူတစ်ယောက်ပါ ပြင်ပမှနေပြီးအဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့တိုက်ခိုက် ကိုယ်ကိုတိုင်လည်းဘာမှမလုပ် ဟုတ်မှာပေါအေ အဲလိုတွေလိုက်ဝေဖန်တဲ့အလုပ်လုပ်မှ ထမင်းနပ်မှန်မှာကိုး သေချာဒါက ခင်ဗျားလိုလူတွေရှိနေသ၍ မြန်မာပြည်ကြီးပြောင်းလဲဖို့အဝေကြီးလိုအပ်နေအုံးမယ်
ပုပ်ခတ်ပြောဆိုမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ပြည်တွင်းမှာမြန်မာပြည်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်တာလေရှိရင် ပြောပြပါအုံး သူများလုပ်တာကိုလည်း အားကျအတုယူတတ်ပုံလည်းမရပါဘူး ဒေါ်စုကို ခင်ဗျားပြောသလို၊မြင်သလို ကျန်တဲ့လူတွေမမြင်ဘူးဆိုတာ သိချင်ရင်ပြည်တွင်းကိုဝင်ခဲ့ပါ အဖြစ်မှန်ဘာမှမသိပဲမပြောချင်စမ်းပါနဲ့ add စစ် ရာ
ဝေဖန်ရေးမှာ ဘာကောင်က ဝေဖန်တယ်ဆိုတာ ကြည့်စရာမလိုဘူး၊ ဘာတွေဝေဖန်တယ်ဆိုတာပဲ အရေးကြီးတယ်။ ဝေဖန်ရေးမှ လက်မခံနိုင်ပဲ ဆတ်ဆတ်ထိ မခံဖြစ်နေကြရင် ဒီမို သမားမလုပ်နဲ့ အာဏာရှင် နောက်မြီးဆွဲပဲ သွားလုပ်ကြ။ ကိုယ့်ကိုဝေဖန်တာနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေဆဲလို့ဆဲ၊နအဖ နဲ့ပေးစားလို့ပေးစား၊ ဒီလိုစိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ၁၀ သက် ဒီမိုကရေစီမရဘူးမှတ်။